TOP 101 အများဆုံးဝေမျှအပြုသဘောအတွေးအခေါ်များ | ကိုယ်ပိုင်အကူအညီအရင်းအမြစ်များ
ဒီမှာ 101 ကိုရှာမယ် အကောင်းဆုံးအပြုသဘောအတွေးများ။ သူတို့ကအများအားဖြင့်မက်ဆေ့ခ်ျများဖြစ်ကြသည် တိုတောင်းသောလွယ်လွယ်ကူကူသင်လာအောင်နှိုးဆွ။
[သင်စိတ်ဝင်စားကောင်းရှိနိုင်သည် ထိပ်တန်းအရှိဆုံးဗိုင်းရပ်စ်အတွေးများနှင့်ထင်ဟပ် 50]
သင်အောက်တွင်တွေ့မြင်မည့်အပြုသဘောဆောင်သည့်သတင်းစကား ၅၀ ၏ရည်ရွယ်ချက်သည်သင်ယခုရင်ဆိုင်နေရသောပြofနာတစ်ခုနှင့်ရင်ဆိုင်ရသောအခါမျှော်လင့်ချက်တစ်ခုပေးဖို့ဖြစ်သည်။ ပြထားပြီး ဒီအပြုသဘောဆောင်တဲ့အတွေးအခေါ်ကဘဝကိုရင်ဆိုင်ဖို့အကောင်းဆုံးလက်နက်တစ်ခုဖြစ်တယ် ကင်ဆာကဲ့သို့သောပြင်းထန်သောဖျားနာမှုဖြစ်သည့်အခါ၎င်းသည်အလွန်အသုံးဝင်သည်။
ငါသည်သင်တို့ကိုဤနှင့်အတူထားခဲ့ပါ 50 အပြုသဘောစာပိုဒ်တိုများ သို့မဟုတ်ဘဝ၏အတွေးများ:
၁) «မင်းငါ့ကိုမကြိုက်ဘူးလား။ ကောင်းတယ်။ မင်းကိုအထင်ကြီးရန်နံနက်တိုင်းထမနေဘူး။ အမည်မသိ။
2) «ဖတ်သောကလေးတစ် ဦး သည်အရွယ်ရောက်ပြီးသူဖြစ်သည်။ စာဖတ်သောအရွယ်ရောက်ပြီးသူတစ် ဦး သည်စိတ်ကူးရသောကလေးဖြစ်သည်။ အမည်မသိ။
(၃) "ပုခက်မှသင်္ချိုင်းအထိကျောင်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ သင်ပြproblemsနာဟုသင်ခေါ်ဆိုသည့်အရာမှာသင်ခန်းစာဖြစ်သည်" Facundo Cabral ။
၄။ `မတီထွင်ပါနဲ့၊ မခိုးနဲ့၊ မခိုးနဲ့၊ မသောက်နဲ့၊ ဒါပေမယ့်တီထွင်ရင်ပိုကောင်းတဲ့ကမ္ဘာကိုတီထွင်ပါ။ သူ့ကိုလှည့်စားလျှင်၊ မင်းခိုးတာ၊ နှလုံးခိုးတာ၊ သောက်တာဆိုရင်မင်းဘဝရဲ့အကောင်းဆုံးအချိန်တွေကိုသောက်ပါ။ ” 'Hitch' ရုပ်ရှင်။
၅) «ပုံမှန်လား။ ပုံမှန်ကဘာလဲ ကျနော့်အမြင်မှာတော့ပုံမှန်သာမန်သာမန်သာမန်စကားသာဖြစ်ပါတယ်။ ဘဝသည်ကွဲပြားခြားနားသောဝံ့ဝံ့သောထိုရှားပါး။ ထူးခြားသောပုဂ္ဂိုလ်များနှင့်သက်ဆိုင်သည်။ " အမည်မသိ။
၆။“ ငွေရှာတာကလူတွေကိုများများအမှုဆောင်ဖို့အာရုံစူးစိုက်ပါ။ လူအများစုကို ၀ န်ဆောင်မှုပေးတာဟာပိုက်ဆံတွေကိုရရှိစေမှာပါ။ Robert Kiyosaki
၇။“ ဒီကမ္ဘာပေါ်မှာအနည်းဆုံးအရာဟာအသက်ရှင်ခြင်းဖြစ်တယ်။ လူအများစုကသာတည်ရှိသည်။ " အော်စကာ Wild ။
၈)“ ငါဟာငါနဲ့တူတယ်၊ မင်းလည်းမင်းနဲ့တူတယ်၊ ငါဖြစ်မနေစေဖို့ငါတည်ရှိနေတဲ့ကမ္ဘာကြီးကိုတည်ဆောက်ကြစို့။ မင်းဟာမင်းဖြစ်ဖို့မပြတ်မနေဘဲဘယ်မှာနေနိုင်မှာလဲ၊ ငါရောသင်ရောတခြားလူတွေကိုအတင်းအဓမ္မဖြစ်စေမယ့်နေရာတစ်ခုကိုတည်ဆောက်ကြစို့။ ငါလိုမင်းလိုမင်းလား " Subcomandante မားကို့စ။
၉။ "ဘယ်တော့မှညမှာအရုဏ် ဦး မအောင်နိုင်ဘူး၊ ပြaနာတစ်ခုကမျှော်လင့်ခြင်းကိုဘယ်တော့မှမအောင်မြင်နိုင်ဘူး။ " Bern Williams ။
၁၀)“ ကျွန်ုပ်တို့အားလုံးသည်ကြိုးစားအားထုတ်မှုနှင့်စည်းကမ်းရှိခြင်းဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့၏အတွေးများနှင့်လုပ်ရပ်များကိုထိန်းချုပ်နိုင်စွမ်းရှိသည်။ ၎င်းသည် ၀ ိညာဉ်ရေး၊ ကာယနှင့်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာရင့်ကျက်မှုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု၏တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းဖြစ်သည်။ " ဂေါ်ဒွန်ခ Hinckley ။
၁၁။ "အလင်းကိုကျွန်ုပ်တို့ကောင်းစွာအသုံးပြုနိုင်လျှင်အမှောင်မိုက်ဆုံးအချိန်များတွင်ပင်ပျော်ရွှင်မှုကိုတွေ့နိုင်သည်။ " Albus Dumbledore
12) « GET ... ! သင်၏ခြေနင်းကိုချွတ်လော့။ အမည်မသိ။
၁၃) "နတ်သမီးပုံပြင်တွေကတကယ်ကိုမှန်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့်နဂါးတွေရှိတယ်ဆိုတာကိုပြောတာမဟုတ်ဘဲသူတို့ကိုနိုင်အောင်လုပ်နိုင်တာလို့ပြောတာပဲ။ " Gilberth Keith Chesterton ။
၁၄။ `အကယ်၍ သင်သည်တောင်ကိုမတက်လျှင်၊ သင်သည်ရှုခင်းကိုခံစားနိုင်မည်မဟုတ်ပါ။ ' ပါပလောနာရိုဒါ။
(၁၅)“ နောက်ဆုံး၌သင်ရရှိသောချစ်ခြင်းမေတ္တာသည်သင်ပေးသောချစ်ခြင်းနှင့်တန်းတူဖြစ်သည်။ ” The Beatles (အဆုံးသည်)
၁၆။ တစ်စုံတစ်ယောက်ကိုသင်အမှန်တကယ်ချစ်လျှင်မည်သည့်အခြေအနေမျိုး၌မဆို၎င်းတို့အားကာကွယ်ရန်နှင့်ပျော်ရွှင်စေရန်မည်သည့်အရာကိုမဆိုလုပ်နိုင်သည်။ အမည်မသိ။
၁၇။ တစ်နေ့မှာသင်ဟာစိတ်ဓာတ်ကျပြီးစိတ်ဓာတ်ကျမယ်ဆိုရင်တစ်ချိန်ကသင်ဟာအလျင်မြန်ဆုံးသုက်ပိုးဖြစ်တယ်လို့ထင်မြင်ပါ။ Groucho မာ့က်စ်။
၁၈။ "သင်၏နေထိုင်မှုကိုသတိပြုမိစေရန်မနေပါနှင့်၊ သင်၏အပြစ်ကိုခံစားရလိမ့်မည်။ " Bob Marley
(၁၉)“ မင်းသေတော့မယ်ဆိုတာကိုသတိရခြင်းဟာသင်ဆုံးရှုံးနိုင်တဲ့အရာတစ်ခုခုကိုစဉ်းစားမိတဲ့ထောင်ချောက်ထဲမကျမိအောင်ရှောင်ရှားဖို့အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းပဲ။ ” စတိဗ်ဂျော့ဘ်။
(၂၀) "ဘ ၀ ဟာမုန်တိုင်းဒဏ်ကိုမစောင့်နိုင်ဘူး၊ မိုးရွာရွာမှာကခုန်တတ်ဖို့သင်ယူနေတယ်" ။ အမည်မသိ။
၂၁) အကယ်၍ ကျွန်ုပ်တို့သည်ကျွန်ုပ်တို့၏ကြောက်စိတ်ကိုမကျော်လွှားနိုင်လျှင်ကျွန်ုပ်တို့၏ကြောက်စိတ်များကိုကျွန်ုပ်တို့၏ကလေးများအားလွှဲပြောင်းပေးလိမ့်မည်။ ဘရုစ်လီ
၂၂) သင့်ကိုချစ်သောသူများထံမှသင်ယူပါ၊ သင့်အားဝေဖန်သူများကိုသင်ပေးပါ။ သင့်ကိုမုန်းသူများကိုလွှတ်ပေးပြီးသင့်ကိုလေးစားသူများကိုဂရုစိုက်ပါ။
၂၃) "ငါ့ကလေးတွေကမင်းကိုမင်းကိုဘယ်လောက်ချစ်မြတ်နိုးသလဲလို့ငါ့ကိုမေးတဲ့အခါငါပြန်လှည့်ပြီးမင်းရဲ့မျက်စိကိုကြည့်ပြီးသူရှိတယ်" လို့ပြောတယ်။
၂၅) ပျော်ရွှင်မှုသည်ခဏသာယာသည့်လိပ်ပြာနှင့်တူသည်။ သင် ပို၍ လိုက်ဖမ်းလေလေ၊ သင့်ထံမှဝေးကွာသွားလေဖြစ်သည်၊ သို့သော်၎င်းကိုစိတ်ရှည်စွာစောင့်ဆိုင်းပါကသူသည်သင့်အပေါ်သို့ကျရောက်သွားနိုင်သည်။
၂၆) "၀ မ်းနည်းခြင်းကအော်ဟစ်ခြင်းကိုမခံ၊
၂၇) မိမိကိုယ်ကိုအကောင်းဆုံးပေးသူသည်နောင်တမရခဲ့ပေ။ (ဂျော့ခ်ျဟာလာ)
၂၈) ပျော်ရွှင်သောသူသည်မည်သည့်အခါကမျှပိုင်ဆိုင်ရန်မကြိုးစားသော်လည်းသူ၌ရှိသည့်အရာသည်အရည်အသွေးနှင့်မကိုက်ညီပါ။ Barnabas တင်ဒါ
၂၉) အောင်မြင်သောသူများသည်၎င်းတို့အားကြီးထွားဖွံ့ဖြိုးရန်နှင့်အထောက်အကူပြုရန်နေ့စဉ်အပြုသဘောအလေ့အထများကိုမွေးထုတ်သည်။ John Maxwell
၃၀)“ ထာဝရသည်ငါတို့လက်၌ရှိ၏။ သင်ထွက်ခွာသွားသောအခါသင့်အားများစွာသောသူတို့သည်သင့်ကိုရှာတွေ့ရန်ကောင်းသောကံကြမ္မာရှိသူများထဲတွင်ဆက်လက်တည်ရှိနေနိုင်အောင်ဤသို့နေထိုင်ပါ။ ” အမည်မသိ
(၃၂) သီလနှင့်အားထုတ်ကြိုးပမ်းအားထုတ်မှုရှိသည့်ပျော်ရွှင်မှုသာလျှင်ဘဝသည်ဂိမ်းမဟုတ်သောကြောင့်ဖြစ်သည်။ အရစ္စတိုတယ်
(၃၃) အောင်မြင်သောလူသားဖြစ်မည့်အစားသူသည်တန်ဖိုးရှိသောလူဖြစ်ရန်ကြိုးစားသည်။ အိုင်းစတိုင်း
(၃၄) လူတိုင်းဖတ်သောစာအုပ်များကိုသင်သာဖတ်ပါကလူတိုင်း၏အတွေးကိုသာသင်စဉ်းစားနိုင်သည်။ Haruki Murakami
၃၅) ရှင်းရှင်းလင်းလင်းမပြောတတ်သူသည်စကားမပြောနိုင်မှီတိတ်ဆိတ်စွာနေရမည်။ ကားလ် Popper
၃၆) «ပညာရေး၏စျေးနှုန်းကိုတစ်ကြိမ်သာပေးသည်။ အဝိဇ္ဇာ၏စျေးနှုန်းတစ်သက်တာများအတွက်ပေးဆောင်ဖြစ်ပါတယ်။
37) "စစ်မှန်သောအဝိဇ္ဇာအသိပညာ၏မရှိခြင်းမဟုတ်ပါဘူး, ဒါပေမယ့်သူကဆည်းပူးရန်ငြင်းဆန်ဆိုတဲ့အချက်ကို။ " ကားလ် Popper
(၃၈) လူတိုင်းသည်မိမိကိုယ်ကိုပြောင်းလဲနိုင်စွမ်းရှိသည်။ အဲလ်ဘတ်အဲလစ်
(၃၉) "စိတ်ဓာတ်ပြင်းထန်သောစိတ်များမှအကြမ်းဖက်ဆန့်ကျင်မှုများကိုအမြဲတွေ့ကြုံခဲ့ရသည်။ " အိုင်းစတိုင်း
၄၀) "ရေနွေးငွေ့၊ လျှပ်စစ်၊ အနုမြူစွမ်းအင်တို့ထက်အင်အားကြီးတဲ့ရည်ရွယ်ချက်တစ်ခုရှိတယ်။ အိုင်းစတိုင်း
(၄၁) ဆင်းရဲဒုက္ခရောက်သောအခါသီလသည်ထင်ရှားပေါ်လွင်သည်။ အရစ္စတိုတယ်
(၄၂) "သင်၏ဘ ၀ ကိုထူးကဲသောအရာတစ်ခုခုဖြစ်စေလိုသောဆန္ဒကိုဘယ်တော့မှမစွန့်လွှတ်ပါနှင့်။ " ဝေါ့အဖြူရောင်
(၄၃) "အောင်မြင်မှုသည်ဤသုံးပါးဟောင်းဖြစ်သည်။ ကျွမ်းကျင်မှု၊ အခွင့်အလမ်းနှင့်ရဲစွမ်းသတ္တိ။ " ချားလ်စ် Luckman
(၄၄) "သင်လိုချင်တာကိုမရနိုင်ရင်မင်းရဲ့သဘောထားပြောင်းသွားတာကပိုကောင်းတယ်။ " Publio တာရိန်းစ်
(၄၅)“ သင့်ပတ် ၀ န်းကျင်၌ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်မင်းရဲ့မျှော်လင့်ချက်မှန်သမျှကိုသစ္စာရှိပါ။ ” Phrygia ၏ Epithet
(၄၆) သင်ပျော်ရွှင်မှုကိုရှာဖွေနေပြီးစိတ်ပျက်အားငယ်ခြင်းကိုရှောင်ရှားလိုပါကသင်ပေါ်တွင်မူတည်သည့်အရာကိုသာလိုချင်သည်။ Phrygia ၏ Epithet
၄၇)“ ငါတို့လိုချင်တာကိုမျှော်လင့်ကြစို့၊ ဒါပေမယ့်ဘာဖြစ်တာလဲဆိုတာကိုခံကြရအောင်” ။ စင်ကာပူ
၄၈) အဆိုးမြင်ရန်ဆိုသည်မှာသင်၏ပြproblemsနာများကိုနှစ်ဆရှည်စေသည်။ အဲလ်ဘတ်အိုင်းစတိုင်း
၄၉) «မိနစ်တိုင်းတွင်စက္ကန့်တိုင်းပျော်ရွှင်ရမည်။ ပစ္စုပ္ပန်မဟုတ်ဘဲအနာဂတ်အသက်ရှင်ပါ။ ဂန္ဒီ
၅၀)“ အောင်မြင်မှုအများစုသည်၎င်းကိုရရှိရန်မည်မျှကြာမည်ကိုသိခြင်းအပေါ်မူတည်သည်။ ” Montesquieu
၅၁) သံမဏိသည်သံမဏိသံချေးခြင်းကဲ့သို့ပင်လှုပ်ရှားမှုမရှိခြင်းသည်ဉာဏ်ရည်ကိုပျက်စီးစေသည်။ လီယိုနာဒိုဒါဗင်ချီ
52) အရာရာတိုင်းကိုပြောတာမဟုတ်ဘူး၊ သူတို့လုပ်တယ်၊ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူတို့လုပ်တာကသူတို့ကိုယ်တိုင်ပြောတာပဲ။ Woody Allen
၅၃) ကောင်းသောအပြုအမူများ၏အားသာချက်တစ်ခုမှာစိတ်ဝိညာဉ်ကိုမြှင့်တင်ရန်နှင့်ပိုမိုကောင်းမွန်သောအရာများပြုလုပ်ရန်၎င်းကိုဖယ်ထုတ်ရန်ဖြစ်သည်။ ရူးဆိုး
၅၄) အတွေးအခေါ်အသစ်ရှိသောလူတစ်ယောက်သည်အတွေးအခေါ်အောင်မြင်သည်အထိရူးသည်။ Mark Twain
၅၅) ပိုက်ဆံရှိရင်လွတ်လပ်မှုကအရမ်းခက်ခဲတယ်။ Gonzalo Torrent Ballester
၅၆) လူတွင်အထင်အမြင်သေးခြင်းထက်ဂုဏ်တင်ထိုက်သောအရာများစွာရှိသည်။ အဲလ်ဘတ်ကမူး
၅၇) ကောင်းမွန်သောပညာရေးသည်မိမိကိုယ်ကိုထင်မြင်သည့်အကောင်းနှင့်အခြားသူများ၏မကောင်းသောအရာများကိုဖုံးကွယ်ထားခြင်းဖြစ်သည်။ Mark Twain
(၅၈) လူသားသည်မိမိ၏သဘောသဘာဝကိုလိုက်လျှောက်သောအခါသူသည်မိမိ၏အခြေခံမူများအတိုင်းလိုက်လျှောက်ခြင်းထက် ပို၍ ဇာတ်ကောင်ပိုပုံရသည်။ Friedrich Nietzsche
၅၉) လွတ်လပ်ခြင်းသည်လူနည်းစု၏ကိစ္စဖြစ်သည်၊ ၎င်းသည်အင်အားကြီးများ၏အခွင့်ထူးဖြစ်သည်။ Friedrich Nietzsche
(၆၀) တစ်ခါတစ်ရံရူးသွပ်ခြင်းသည်အခြားပုံစံဖြင့်တင်ပြသောအကြောင်းပြချက်များသာဖြစ်သည်။ Goethe
၆၁) အသက်ရှင်ရန်အကြောင်းပြချက်ရှိသူသည်“ အဘယ်သို့” ကိုရင်ဆိုင်နိုင်သည်။ Friedrich Nietzsche
(၆၂) ဘ ၀ ၏ရုန်းကန်မှုတွင်အောင်မြင်ရန်လူတစ် ဦး သည်ကြီးမားသောဥာဏ်ရည်သို့မဟုတ်ကျောက်သားနှလုံးသားရှိရမည်။ Maxim Gorky
64) တူညီတဲ့ဇာတ်လမ်းကသူ့ဟာသူထပ်ခါထပ်ခါထပ်ခါတလဲလဲ - တစ် ဦး ချင်းစီသည်မိမိကိုယ်ကိုသာစဉ်းစားသည်။
65) စဉ်းစားတွေးခေါ်ခြင်းသည်သိခြင်းထက် ပို၍ စိတ်ဝင်စားသည်၊ သို့သော်ကြည့်သည်ထက်နည်းသည်။
တွေးတောခြင်းမရှိဘဲသင်ယူခြင်းသည်အချည်းနှီးဖြစ်သည်။ သင်ယူခြင်းမရှိဘဲတွေးတောခြင်း၊ ကွန်ဖြူးရှပ်
ကောင်းတာ၊ မကောင်းတာဘာမှမရှိဘူး၊ အဲဒါကိုအဲဒီလိုပေါ်လွင်စေတဲ့လူ့အတွေးပဲ။ ဝီလျံရှိတ်စပီးယား
69) အတွေး၏အလုပ်သည်ရေတွင်းတစ်တွင်းတူးခြင်းနှင့်ဆင်တူသည်။ အစပိုင်းတွင်ရေသည်တိမ်နေသော်လည်းနောက်ပိုင်းတွင်ရှင်းလင်းလာသည်။ #Proverb
၇၁) အတှေးအချေါမြားသညျသငျအားဖွငျ့ဖျားနာမှုအားလုံးကိုကုစားနိုငျသောဆေးဆိုင်ဖွစျသငျ့သညျ။ ဗော်တဲ
၇၂) ကျွန်ုပ်တို့အားလုံးသည်ကျွန်ုပ်တို့ထင်ထားသည့်အတိုင်းဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏အတွေးများကိုအခြေခံသည်။ ဗုဒ္ဓ
73) ငါတို့ရှိသမျှသည်တူညီသောကောင်းကင်အောက်တွင်နေထိုင်ကြသော်လည်းကျွန်ုပ်တို့အားလုံးသည်တူညီသောမိုးကုပ်စက်ဝိုင်းမရှိပါ။ Konrad adenauer
74) "သင်ထူးခြားသောအရာတစ်ခုခုကိုလုပ်ဖို့မကြိုးစားလျှင်ရှင်သန်ရခြင်း၏ဆိုလိုရင်းကဘာလဲ" ဂျွန်စိမ်း
၇၅) ငါတို့ကောင်းကောင်းလုပ်ချင်တာကိုပဲလုပ်တယ်။ Colette
မိမိကိုယ်ကိုစုံလင်သည်ဟုယူမှတ်သူများလည်းရှိသော်လည်း၎င်းတို့သည်၎င်းတို့ကိုယ်တိုင်မတောင်းဆိုသောကြောင့်သာဖြစ်သည်။ Hermann Hesse
၇၇) ညသည်အလုပ်လုပ်ရန်တိတ်ဆိတ်သောအချိန်ဖြစ်သည်။ စဉ်းစားတွေးခေါ်ကူညီပေးသည်။ ဂရေဟမ်
79) ပန်းပွင့်တွေကိုရေမွှေးပေးခိုင်းတယ်။ အမျိုးသားများအတွက်ပညာရေး။ #Proverb
၈၀) လူသည်အိပ်မက်မက်နေသောအခါမျိုးတွင်ပါရမီရှိသူဖြစ်သည်။ Akira Kurosawa
၈၁) အရူးကမ္ဘာတွင်အရူးလူမျိုးများသာစိတ်ဖောက်ပြန်ကြသည်။ Akira Kurosawa
၈၂) သင်ဖြေရှင်းနိုင်သည်ထက်သင်ကိုယ်တိုင်ပြproblemsနာများပိုမေးရန်မလိုအပ်ပါ။ Jorge Semprún
၈၃) လူတစ် ဦး ကိုသူ့အဖြေများထက်သူ့မေးခွန်းတွေကပိုအကဲဖြတ်သင့်သည်။ ဗော်တဲ
84) သင်ကမ်းခြေကိုမျက်ခြည်မပြတ်ရန်သတ္တိမရှိလျှင်သင်မည်သည့်အခါမျှသမုဒ္ဒရာကိုဖြတ်ကူး။ မရပါ။
၈၅) သင်၏စိတ်ကူးသည်အာရုံစူးစိုက်မှုမရှိသောအခါသင်၏မျက်စိပေါ်တွင် မူတည်၍ မရပါ။ ချားလ်စ်ဒါဝင်
86) အရာများ၏အဓိပ္ပာယ်ကိုအရာတို့ကိုသူတို့ကိုယ်သူတို့၌မဟုတျပါဘူး, ဒါပေမယ့်သူတို့အပေါ်ထားရှိတဲ့ကျွန်ုပ်တို့ရဲ့သဘောထား။ Saint-Exupéryမှဖြစ်သည်
၈၇) ကျွန်ုပ်တို့နေထိုင်သောဤကမ္ဘာတွင်အရာရာသည်စဉ်ဆက်မပြတ်နှင့်မလွှဲမရှောင်ပြောင်းလဲမှုများဖြစ်ပေါ်စေသည်။ Jean-Baptiste Lamarck
၈၈) သင်လွတ်လွတ်လပ်လပ်မသွားနိုင်သည့်နေရာသို့မဝင်ရ။ Mateo Alemán
၈၉) ကံကြမ္မာသည်ကဒ်များကိုဖျက်ပစ်သူဖြစ်သည်၊ သို့သော်ကျွန်ုပ်တို့ကစားသည်။
90) ရူးသွပ်တဲ့ဂရမ်မရှိဘဲပါရမီမရှိ။ #Aristotle
၉၁) အိပ်မက်ဆိုးများကဲ့သို့ငါစိတ်ပျက်အားလျော့မှုကိုအမှန်တရားနှင့်ရောထွေးခဲ့သည်။ #JeanPaulSartre
93) မင်းရဲ့ဘ ၀ ကိုရှင်သန်စေဖို့နည်းလမ်းနှစ်ခုရှိပါတယ်။ တစ်ခုကတော့အံ့ဖွယ်အမှုတစ်ခုမဟုတ်သကဲ့သို့အခြားတစ်ခုကအရာရာတိုင်းဟာအံ့ဖွယ်အမှုတစ်ခုလိုပါပဲ။ အဲလ်ဘတ်အိုင်းစတိုင်း
၉၄) မင်းတို့ရဲ့ရန်သူတွေနဲ့ပေါင်းသင်းရမယ်။ ငါတို့အားလုံးဟာငါတို့သူငယ်ချင်းတွေမဖြစ်နိုင်ဘူးလေ။ #Tocqueville
၉၆) လူတို့၏ပျော်ရွှင်မှုကိုပြုလုပ်နိုင်သည့်စွမ်းရည်ကိုလူ့အဖွဲ့အစည်းများအားဆုံးဖြတ်သင့်သည်။ Alexis Tocqueville
၉၇) အမျိုးသားများသည်စိတ်ကူးများထက်ပိုပြီးစိတ် ၀ င်စားသည်။ Alexis Tocqueville
(၉၉) လူသားသည်သူချမှတ်ထားသောစည်းမျဉ်းများကိုမလိုက်နာလျှင်ပင်စိတ်နှလုံးရှိသည်။ Ernest Hemingway
၁၀၀) ရွေးချယ်မှုတစ်ခုလုပ်ရမယ်၊ မလုပ်ရင်ဘယ်တော့မှရွေးချယ်မှာမဟုတ်ဘူး။
၁၀၁) သာယာသောစိတ်များ၏ပြင်းထန်သောစိတ်ဓာတ်များသည်အမြဲတမ်းအကြမ်းဖက်ဆန့်ကျင်မှုများကိုကြုံတွေ့ခဲ့ရသည်။ အဲလ်ဘတ်အိုင်းစတိုင်း
သင်၏နေ့စဉ်အသက်တာ၌သင့်ကိုအထောက်အကူပြုနိုင်ပြီးဤစာရင်းတွင်မပါ ၀ င်သောအတွေးများရှိပါက၎င်းကိုအောက်ဖော်ပြပါမှတ်ချက်များတွင်ထားခဲ့နိုင်သည် ????
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - ကိုယ်ပိုင်အကူအညီအရင်းအမြစ်များ » နည်းလမ်း » စာပိုဒ်တိုများ » ထိပ်ဆုံး ၁၀၁ အများဆုံးဝေဖန်နိုင်သောအပြုသဘောအတွေးအခေါ်များ (နှင့်သူတို့၏စာရေးသူများ)
223 မှတ်ချက်များ, သင့်စွန့်ခွာ
Esnelia Stella Gaviria ဟုသူကပြောသည်
Esnelia Stella Gaviria အားပြန်ပြောပါ
ဝမ်းသာပါတယ်၊ ကျွန်တော်အဲဒါကိုလိုအပ်တယ်၊ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
အပြုသဘောထားသောစာပိုဒ်တိုများစုစည်းခြင်းသည်အလွန်ကောင်းသည်။ Subcomandante မားကို့စ (ကျွန်တော်သည်အခြားသူများကိုကျွန်ုပ်တို့ကဲ့သို့အတင်းအကျပ်မလုပ်ဘဲအတူတကွနေထိုင်ရန်သင်ယူရမည်။ ၎င်းသည်ကမ္ဘာ၏ဂုဏ်အသရေဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်အရသာ၊ မတူကွဲပြားမှု၊ သင်နှင့်အတူနေထိုင်ရန်သင်ယူရန်သာလိုအပ်သည်။ စတိဗ်ဂျော့ဘ် (၎င်းသည်သူသေဆုံးသောအခါ၎င်းဖြစ်ပျက်ခဲ့လျှင်၎င်းသည်ရေတွက်။ ရသောအရာများနှင့် ပတ်သက်၍ တွေးမိသည်မှာမည်မျှထူးဆန်းသည်ကိုတွေးတောစေခဲ့သည်။ ၎င်းသည်ရေတွက်။ ရမည့်အရာများမှာမတော်တဆမဟုတ်ဘဲများပြားလှသောအရာများဖြစ်သည်။ ) ၂၃ ။ ! အထူးသဖြင့်ထိုစကားစုကကျွန်ုပ်မေ့နေသောအရာများကိုမှတ်မိစေခဲ့သည်။
အဲလစ်ဇဘက် Valles Carrizales ဟုသူကပြောသည်
Elizabeth Valles Carrizales ထံပြန်သွားပါ
ကြိုက်နှစ်သက်ဖို့ Reply ကောင်းသောကံရှိသည်
Adilia Paniagua ဟုသူကပြောသည်
Adilia Paniagua အားပြန်ပြောပါ
Joseph Araya ဟုသူကပြောသည်
Jose Araya ကိုပြန်ပြောပါ
Adriana Ibuado ဟုသူကပြောသည်
adriana ibuado သို့ပြန်သွားရန်
Benito cruz ဟုသူကပြောသည်
ငါ Bren Williams အရာကြိုက်တယ်မျှော်လင့်ချက်အောင်နိုင်သည့်ပြproblemနာမရှိပါဘယ်တော့မှမ
Benito Cruz အားပြန်ပြောပါ
Juan Morcho ဟုသူကပြောသည်
အပြုသဘောအတွေးများက ၀ ိညာဉ်ကိုကြွယ်ဝစေသဖြင့်သင်တို့ကိုချစ်သောမေတ္တာသည်ဘယ်တော့မျှပျောက်ကွယ်သွားမည်မဟုတ်။
juan morcho အားပြန်ပြောပါ
Luis Ciraiz ဟုသူကပြောသည်
ဂျနီဖာ (JJOM) ဟုသူကပြောသည်
ကိုယ်ကျင့်တရားစံနှုန်းများနှင့်လိုက်လျောညီထွေဖြစ်ခြင်းသည်စျေးပေါသောလူ့အဖွဲ့အစည်းထက် ပို၍ ကောင်းသည်။
ရောဘတ် Romer ဟုသူကပြောသည်
ROBERTO ROMER သို့ပြန်ပြောပါ
Leonte Rivera ဟုသူကပြောသည်
ထိုအပြုသဘောဆောင်သောစကားစုများသည်အထူးသဖြင့် ၁၈ နှင့်အလွန်တိကျသည်။ ၁၉ သည်လူများအားအကြောင်းအရာမှကင်းဝေးစေရန်နှင့်ဝိညာဉ်ရေးကိုပိုမိုအာရုံစိုက်ရန်ကျွန်ုပ်တို့အားကူညီလိမ့်မည်။
leonte rivera အားပြန်ကြားပါ
ငါ ၂၆ ကိုသဘောမတူဘူး၊ မင်းငါ့ကိုငိုတာကသဘာဝပဲ။ အဲဒီမှာသူက ၀ မ်းနည်းတာကိုမကျော်လွှားနိုင်ဘူး၊ မင်းကိုဒေါသမထွက်စေဘဲ၊ အားကြီးအောင်လုပ်ပြီး၊ သင်ခံစားရသောအရာကိုဖော်ပြ!
Alfonso Leyva ဟုသူကပြောသည်
ငါ့နောက်၌ပြောသောသူအပေါင်းတို့သည်ငါ့ရှေ့မှာထင်ရှားသည်မဟုတ်လော။ (by: Alfonso Leyva) ။
Alfonso Leyva ကိုပြန်သွားပါ
Juanca Milito Aguilar နေရာချထားပုံ ဟုသူကပြောသည်
Juanca Milito Aguilar နေရာချထားပုံ
Juanca Milito Aguilar ထံပြန်သွားပါ
အတွေးတွေရဲ့လှပတင့်တယ်မှုတွေကိုငါမှော်လို့ခေါ်လိမ့်မယ်။ သူတို့တွေဟာမင်းရဲ့ရှုထောင့်ကိုပြောင်းလဲစေတယ်၊ ​​ငါတို့ဖြတ်သန်းသွားတဲ့အချိန်ပေါ်မူတည်ပြီး lolos ပြောသလို switch ကိုပြောင်းကြမယ်။
ငါ ၁၁ ယောက်ကြိုက်တယ်၊ ငါတို့ဟာပြwithနာတစ်ခုခုကိုကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းနိုင်တယ်ထင်တယ်၊ ပြုတ်ကျတာကအနားယူခြင်းပဲ၊ ဆက်လုပ်ရမယ်ဆိုတာသေချာတယ်။
“ မင်းကိုအမြဲတမ်းသွင်ပြင်လက္ခဏာပြခဲ့တဲ့တီထွင်ကြံဆမှုနဲ့ပဏာမခြေလှမ်းဟာမင်းရဲ့ဘဝနဲ့သင့်ပတ် ၀ န်းကျင်ကလူတွေရဲ့အပြုသဘောဆောင်တဲ့အကျိုးဆက်တွေကိုဖြစ်ပေါ်စေပါစေ။
သင်၏ထူးခြားသောပျော်ရွှင်မှုနှင့်ဟာသကောင်းကသင်၏နေ့စဉ်ဘ ၀ ၏အစာဖြစ်သည်။
ပျော်ရွှင်မှုတွင်ဘဝဆီသို့ ဦး တည်သောသဘောထားပါဝင်သည်။
သင်၏နှလုံးသားကို ပြောင်းလဲ၍ သင်၏ဘဝကိုပြောင်းလဲပစ်ပါ။
ID လိဒီ ဟုသူကပြောသည်
သင်ထင်သမျှနှင့်သင်လုပ်သောအရာသည်သင်၏ဘ ၀ တစ်လျှောက်လေ့လာသင်ယူခဲ့ခြင်း၏ရလဒ်ဖြစ်သည်။ အခြားရလဒ်တစ်ခုရလိုလျှင်သင်၏စဉ်းစားတွေးခေါ်ပုံနှင့်နေထိုင်မှုပုံစံကိုပြောင်းလဲပါ။
ဆန်နီ MATVILL ဟုသူကပြောသည်
SONNY MATVILL သို့ပြန်ပြောပါ
Luz မာရိသညျ Gmez Quintero ဟုသူကပြောသည်
ငါနည်းနည်းစိတ်ဓာတ်ကျတာပေါ့။ ဒါကြောင့်ဒီလိုစာပိုဒ်တိုတွေကိုငါသဘောကျတယ်။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အဲဒါကငါ့ကိုအကောင်းမြင်သူတွေအတွက်မကောင်းတဲ့အတွေးတွေပြောင်းစေတယ်။
Luz Mary Gmez Quintero အားစာပြန်ပါ
bacs များ ဟုသူကပြောသည်
ကိုယ့်ကိုကိုယ်ချစ်ပါ၊ ကိုယ့်ကိုကိုယ်ချစ်ပါ၊ လက်ခံပါ၊ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုပြပါ၊
နပိုလီယန်ဟေးလ်ကအပြုသဘောဖြင့်အမြဲတမ်းစဉ်းစားရန်အလွန်ကောင်းသောစကားစုမှ“ မင်းဘယ်လိုထင်သလဲ” ဟူ၍ ဖြစ်သည်။
သင်လုပ်နိုင်သည်ဟုထင်လျှင်သင်လုပ်နိုင်သည် Og Mandino
Peter Life ဟုသူကပြောသည်
အလွန်အမင်း Phrases !!
ငါ Self- အကူအညီနဲ့ခေါင်းစဉ်များစိတ်ဝင်စားတယ်နှင့်ငါသည်လည်းအတူတူအကြောင်းကိုရေးဖို့။
Peter Vida ကိုပြန်ပြောပါ
ဘ ၀ ၌အဘယ်အရာမျှလုံခြုံမှုမရှိ၊
Jesus Lopez ကိုပြန်ပြောပါ
Ocotal Nueva segovia နီကာရာဂွာ ဟုသူကပြောသည်
တစ်မိနစ်၌သင်၏အသက်တာဆုံးရှုံးခြင်းထက်အသက်တာ၌တစ်မိနစ်စောင့်ဆိုင်းခြင်းသည် သာ၍ ကောင်း၏။
Ocotal Nueva segovia နီကာရာဂွာသို့တုံ့ပြန်ပါ
Y လိ ဟုသူကပြောသည်
Oswaldo Rivera Gomez ဟုသူကပြောသည်
ကျွန်ုပ်၏မေးခွန်းမှာကျွန်ုပ်ရေးသားထားသောအတွေးကိုမည်သည့်နေရာတွင်ကျွန်ုပ်မှတ်တမ်းတင်နိုင်သနည်း၊ အခြားသူတစ် ဦး ၏ခိုးကူးမှုမခံရန်အထောက်အကူစာဖြင့်ရေးသားထားခြင်းဖြစ်သည်။ ကူညီပေးမှုအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
Oswaldo Rivera Gómezအားပြန်ပြောပါ
Giovanny mejia ဟုသူကပြောသည်
Giovanny Mejia အားပြန်ပြောပါ
Elvis cedeno ဟုသူကပြောသည်
Jancarlo Paulino ဟုသူကပြောသည်
ဟယ်လိုနေကောင်းလား။ အပြုသဘောဆောင်သောသဘောထားများနှင့်အပြုသဘောဆောင်သောအတွေးများကိုအမြဲတမ်းထိန်းသိမ်းရန်အလွန်ကောင်းမွန်သောဆောင်းပါးသည်ကျွန်ုပ်တို့၏တာ ၀ န်ဖြစ်သည်။
Jancarlo Paulino အားပြန်ပြောပါ
လမ်းမှာကျွန်ုပ်တို့စွန့်ပစ်လိုက်တဲ့ခြေရာတွေကိုရေတွက်ပြီးဘယ်လောက်ကောင်းကောင်းခြေနင်းနင်းပြီးပြီလဲ၊ ဒါမှမဟုတ်လျင်မြန်စွာဖျက်စီးသွားတာကိုအတည်ပြုနိုင်ရင်၊ ခြေရာကိုဘယ်တော့မှမချန်လှပ်ထားတာကိုကျွန်ုပ်တို့ရိုးရိုးရှင်းရှင်းလေ့လာမယ်ဆိုရင်၊ ဆက်သွားပါ။ ကျွန်ုပ်တို့တွင်အရာများရှိသည်ဟုယုံကြည်ကြသည်၊ အရာအားလုံးကိုဖြတ်သန်းသွားသည်ဟုကျွန်ုပ်တို့ယုံကြည်သည်၊ သို့သော်ကျွန်ုပ်တို့သည်ကျေနပ်မှုမရသေးသောအချည်းနှီးသောနိမ့်ကျသောနေရာ၌နက်ရှိုင်းစွာနက်နက်ရှိုင်းရှိုင်းရှိသည်။ စိုးလ် ... စိုးလ်သည်အလွန်ရှုပ်ထွေးပြီး၊ ဘဝသည်ရှုပ်ထွေးမှုများစွာနှင့်ပြည့်နှက်နေသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်အဆုံး၌တည်ရှိသည်ကိုမသိသော်လည်းသေခြင်းသာလျှင်ကျွန်ုပ်တို့လမ်းစဉ်ကိုအမြဲလျှောက်လှမ်းနေသလား။ ဒါမှမဟုတ်သေခြင်းတရားကကျွန်ုပ်တို့ကိုအံ့အားသင့်စေပြီးငါတို့အချိန်ကုန်ပြီဆိုတာကိုပြသသလား။ ထိုလမ်း၏အစိတ်အပိုင်းများတွင်အမြဲတမ်းလုပ်စရာတစ်ခု၊ နက်ရှိုင်းစွာနှင့်စိတ်ရင်းမှန်ဖြင့်ချစ်မြတ်နိုးခြင်း၊ ဘဝတွင်သင့်ကိုအံ့အားသင့်စေသည့်အရာနှင့်နောက်ဆုံးသင်၏အသက်တာကိုပြန်ရှင်သန်လိုသောကြောင့်အသေခံရန်ပျော်ရွှင်ခြင်းတို့ပါဝင်သည်။
လူတွေကိုပြောင်းလဲနိုင်မယ်လို့ယုံကြည်တယ်။ ဒါကငါတို့ရဲ့အကြီးမားဆုံးအမှားပဲ။ လူတွေကသူတို့လိုချင်တဲ့အချိန်မှာပဲပြောင်းလဲတတ်ကြတယ်။
မင်းထင်နိုင်တာပဲဖြစ်ဖြစ်မင်းမဖြစ်နိုင်ဘူးလို့ထင်ရင်မင်းလည်းမှားတယ်” John Ford ။
"ကံတစ်ခုသဘောထားဖြစ်ပါတယ်။ " အမည်မသိ။
အယ်လ်ဗာရို အယ်လ်ဗာရက်ဇ် ဟုသူကပြောသည်
“ ငါတို့ကြောက်စိတ်ကိုမကျော်လွှားနိုင်ရင်ငါတို့ကြောက်စိတ်တွေကိုငါတို့ကလေးတွေကိုငါတို့လွှဲပြောင်းပေးလိမ့်မယ်။ ” Bruce Lee အရမ်းစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတယ်၊ ငါကြိုက်တယ်။ ငါတို့အောင်ပွဲခံ၏ရောင်ပြန်ဟပ်မှုဖြစ်ရမည်
alvaro alvarez အားပြန်ပြောပါ
Sebastian escobar ဟုသူကပြောသည်
ယုံကြည်မှုသည်သင်၏ပန်းတိုင်များဆီသို့ ဦး တည်သောလှုံ့ဆော်မှုဖြစ်သည်။
Sebastian Escobar အားပြန်ပြောပါ
ကြောင်း mole de holla သောသူအားပေး!
ဘ ၀ သည်ရှုပ်ထွေးသော်လည်းကျွန်ုပ်တို့လူသားများအနေဖြင့်ကြီးထွားရန်အလို့ငှာထိုဆွေးကိုလုပ်ရမှာဖြစ်သည်။ Bryan slik ဖြင့်ပြုလုပ်နိုင်ပါတယ်
«သင်လုပ်သမျှအားလုံးဟာသင်ကြိုက်နှစ်သက်ခြင်းမရှိသည့်တိုင်စိတ်အားထက်သန်မှုဖြင့်ပြုလုပ်ပါ။ အောင်မြင်မှုများ၏ကျေနပ်မှုသည်အားထုတ်မှုထက်ပိုမိုသာလွန်သည်။ LE ချားလ်စ်။
Luis E Charles ကိုပြန်ပြောပါ
Diego Armando Ortiz Zapata ဟုသူကပြောသည်
diego armando ortiz zapata မှစာပြန်ရန်
ကောင်းတဲ့ရောင်ပြန်ဟပ်မှုတွေကငါ့ကိုလှည့်ပတ်ပြီးထင်ဟပ်စေပြီးငါ့ရဲ့ရင့်ကျက်မှုအားလုံးထက်ပိုပြီးမြင့်တက်နေတယ်။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ဖတ်တာကျေးဇူးတင်ပါတယ် x လှပတဲ့ msg ကောင်းတဲ့ noxez
elmer cruz သို့ပြန်သွားရန်
ပထမ ဦး ဆုံးတိုက်ပွဲမပါဘဲ»🙂
ဒံယလေသ Cortes ဟုသူကပြောသည်
Life ဆိုတာလက်မှတ်မ ၀ ယ်ဘဲတက်ရောက်ရမယ့်ရုပ်ရှင်ဖြစ်ပြီးအဓိကသရုပ်ဆောင်ကိုယ်တိုင်ကိုယ်တိုင်ပါ။ ရုပ်ရှင်ကရယ်စရာကောင်းလား၊ ငြီးငွေ့စရာကောင်းလားဆိုတာပေါ်မူတည်တယ်။
ဒံယေလ Cortes ကိုပြန်ပြောပါ
SHIRLEY Rocio Gonzalez Mercedes ဟုသူကပြောသည်
"မဟုတ်ပါ၊ ကျွန်ုပ်တို့တွင်မရှိသောအရာကိုကြည့်ကြပါစို့၊ ကျွန်ုပ်တို့၌ရှိသောအရာကိုမဟုတ်ပါ၊ ကျွန်ုပ်တို့ရရှိထားသည့်အရာများအားဖြင့်၎င်းကိုတွေ့ရှိလိမ့်မည်"
SHIRLEY ROCIO GONZALEZ MERCADO သို့စာပြန်ပါ
Ernesto tenorio ဟုသူကပြောသည်
Ernesto Tenorio အားပြန်ပြောပါ
Ernesto၊ ကျွန်ုပ်သည်ပျော်ရွှင်သောဘဝ၊ ကျန်းမာရေး၊ ချစ်ခြင်းနှင့်ငွေများရှိခဲ့ကာငှက်ပျောခွံပေါ်တက်ပြီးတွင်းနက်ထဲသို့ဝင်သွားခဲ့သည်။ ကျွန်ုပ်၏ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာကျန်းမာရေးမအောင်မြင်ပါ။ အပြေးသမား၊ ဒူးတလုံးနဲ့ကျွန်တော်ခြေဆွံ့ပြီးတဲ့နောက်ကျွန်တော့်စိတ်ကအဝါရောင်ရှိပြီးကျွန်တော့်ရဲ့အခက်အခဲတွေကိုမဖြေရှင်းနိုင်ပုံရတယ်။ ကျွန်တော်အရမ်းစိတ်ဓာတ်ကျလာပြီးတွင်းထဲကနေထွက်ဖို့ခက်တယ်။ ကျွန်တော့်ဇနီးရဲ့ထောက်ပံ့မှုဖြင့် ငါရှေ့ဆက်သွားဖို့ကြိုးစားနေတဲ့ချစ်ရသူတွေပါ။ ဒီစိတ်ဓာတ်ရေးရာအကျပ်အတည်းမှာကိုယ့်ကိုယ်ကိုထောက်ပံ့ပြီးအခက်အခဲတွေကိုကျော်လွှားနိုင်ဖို့အဆိုတင်သွင်းပါတယ်။ မင်းရဲ့တုန့်ပြန်မှုကို Danielson မှအာရုံစိုက်မိတယ်။
ဘဝမှာအဓိပ္ပာယ်မရှိဘူးလို့ပြောရင်ဘယ်တော့မှအဓိပ္ပာယ်မရှိဘူး၊ ငါဒီလိုလုပ်သင့်တယ်၊ ငါလုပ်ခဲ့တယ်၊ ငါလုပ်တယ်၊ မကူညီနိူင်ဘူး၊ အခုငါတို့မျှော်လင့်ပြီးဖြေရှင်းချက်ကိုရှာရမယ်၊ အတိတ်ကိုကျန်ရစ်ခဲ့ပြီးသင်ခန်းစာသင်ပေးတယ် ငါတို့ထပ်ခါတလဲလဲမပြောသင့်ဘူး၊ ဒါကငါတို့လုပ်ခဲ့တဲ့အမှားတွေပဲလေ။ လူသားအားလုံးအမှားတွေလုပ်ခဲ့ကြပြီးလူသားတွေဟာသူတို့ကိုအသိအမှတ်ပြုပြီးငါတို့ရဲ့စိတ်ဝိညာဉ်ကိုကုစားပြီးရှေ့ကိုရှေ့သို့ရွေ့သွားကြတယ်။ သူတို့ကိုနှိမ့်ချစွာလက်ခံသူတွေအတွက်ကောင်းတဲ့အရာတွေဖြစ်လာလိမ့်မယ်။
ငါဆုံးဖြတ်ချက်တွေ၊ အတွေးတွေ၊ ခံစားချက်တွေနဲ့စိတ်ခံစားမှုတွေအားလုံးကိုလက်ခံတယ်၊ ငါသူတို့ကိုဖန်တီးနေတယ်ဆိုတာငါသိတယ်၊ ငါ့ကိုပတ်ပတ်လည်မှာဖြစ်ပျက်နေတာတွေ၊ တခြားသူတွေလုပ်နိုင်တာ၊
အော်ငေါက်သူကိုပြုံးပါ၊ ဝေဖန်သူကိုလျစ်လျူရှုပါ။ သင်ဂရုစိုက်သူကိုပျော်ရွှင်အောင်လုပ်ပါ။
ကမ္ဘာမှာဒီစမ်းသပ်မှုတွေအများကြီးရှိတာကသင်ဟာပြproblemsနာတွေကိုရင်ဆိုင်နိုင်ဖို့နဲ့ဘဝတစ်ခုလုံးမှာကြုံတွေ့နေရတဲ့ကွဲပြားခြားနားမှုတွေကိုအဖြေရှာနိုင်ဖို့သင်ယူခြင်းဖြစ်တယ်။ \_ t / အကယ်၍ သင်ဖြစ်လျှင်ဘာကြောင့်ဘုရားသခင်အားငြင်းဆိုခြင်းမပြုကြပါနှင့် သင်တို့ကိုဆန့်ကျင်ဘက် ပြု၍၊
ဤစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းပြီးအလင်းဖြည့်ထားသောစာပိုဒ်တိုများကိုမျှဝေခြင်းအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ သူတို့ကသင့်ကိုထင်ဟပ်စေပြီးသင်အမှားလုပ်နေတယ်၊ ​​ဘယ်လမ်းကိုပြန်သွားနိုင်မယ်ဆိုတာနားလည်စေတယ်။
သင်၏အတွေးများကိုပြောင်းလဲနိုင်သောသူသာဖြစ်ပြီးသင်၏ဘဝတွင်ထိုအတွေးများပေါ်လာလိမ့်မည်ကိုသတိရပါ။ အတွင်းအပြင်အဖြစ်အပြင်ဘက်ဖြစ်သကဲ့သို့, အပြင်၌ရှိသကဲ့သို့»
ဘ ၀ သည်အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏အကောင်းဆုံးအပြုံးဖြင့်မနက်တိုင်းထနိုင်သည့်အကြောင်းရင်းမှာကြောက်ရွံ့ခြင်းမရှိဘဲလမ်းလျှောက်ရန်ခွန်အားကိုပေးသည်။ နိုးထမှုတစ်ခုစီတွင်ကျွန်ုပ်တို့အတားအဆီးများရှိနေလင့်ကစားကျွန်ုပ်တို့အားစောင့်မျှော်နေကြောင်းသိထားခြင်း သူတို့ကိုပွေ့ဖက်။ သူတို့ကိုယ်တိုင်အကောင်းဆုံးပေးနိုင်မည်၊ ၎င်းသည်ကျွန်ုပ်တို့၏စိတ်၊ ကျွန်ုပ်တို့ဘဝ၊ လွတ်လပ်မှုနှင့်ခံစားချက်တို့ကိုချိုးဖျက်နိုင်သည်ဟုထင်ရသည့်တိုင်ပင်ရယ်မောနိုင်ခြင်းကိုဆိုလိုသည်
နေ့တိုင်းကျွန်ုပ်တို့သည်အကောင်းဆုံးသောအရာသည်ကျွန်ုပ်တို့၏ဖြစ်တည်မှုဖြစ်ရပ်မှန်ဖြစ်သည်၊ ၎င်းသည်ကျွန်ုပ်တို့အားဒုတိယပြသနာများကိုဝေမျှရန်ပိုမိုကောင်းမွန်သောအရာများကိုပြုလုပ်ရန်ကျွန်ုပ်တို့အားကူညီသည်။ ကျွန်ုပ်တို့ကိုတွေ့မြင်သူများသည်တစ်ခုချင်းစီကိုနားလည်နိုင်ရန်အတွက်အပြုံး၏ကျေးဇူးကိုပေးသည်ကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းယုံကြည်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့တစ် ဦး သည်ဤစကြ ၀ universeာတွင်အနည်းငယ်သာရှိခြင်းသည်အထူးဖြစ်ပြီး၎င်းသည်ကျွန်ုပ်တို့အားအကောင်းဆုံးဖြစ်စေပြီးကျွန်ုပ်တို့၏နှလုံးကိုပိုမိုနက်ရှိုင်းစွာခံစားသိရှိနိုင်ရန်နှင့်ကျွန်ုပ်တို့မည်မျှလှပသောအလှအပများကိုတွေ့မြင်ခံစားရမည်ကိုရှာဖွေရန်ကျွန်ုပ်တို့အားနေ့စဉ်သင်ကြားမှုများကိုအကောင်းဆုံးပြုလုပ်ပေးသည်။ ကြီးမြတ်ဒီတည်ရှိ
ကားလို့စ် Martel ဟုသူကပြောသည်
ငါဟာကောင်းမွန်တယ်လို့ဟန်ဆောင်ခဲ့တယ်၊ ငါဘာမှမမှားဘူးလို့ဟန်ဆောင်ခဲ့တယ်၊ ဒီနေရာမှာငါဟာအရင်ကထက်တစ်ယောက်တည်းနေတယ်။
ငါ့ကိုသိဖို့လိုတဲ့သူကအကောင်းဆုံးသတိပြုမိနေသရွေ့ဟန်ဆောင်၊ ဟန်ဆောင်၊ ဟန်ဆောင်ပါ။ ပြီးတော့ "သင်ဂရုမစိုက်ဘူးလို့ပြောတယ်။ " ရှိတယ်။
တစ်ခါတလေငါစိတ်ဓာတ်ကျတာဟာလောကနဲ့ဆက်ဆံဖို့နည်းလမ်းတစ်ခုလို့ထင်တယ်။ တချို့အရက်သောက်ကြတယ်၊ တချို့ကမြင့်တယ်၊ လူတချို့စိတ်ဓာတ်ကျကြတယ်။ အဘယ့်ကြောင့်ဆိုသော်ဤအရာများစွာသည်ထွက်ပေါ်လာနေသောကြောင့်သင်၎င်းကိုကိုင်တွယ်ရန်တစ်ခုခုလုပ်ရန်လိုအပ်သည်။
Carlos Martel အားပြန်ပြောပါ
သငျသညျဟန်ဆောင်လို့မရပါဘူးခံစားချက်များကိုဖြည်းဖြည်းချင်းသေဆုံးရန်ဖြစ်ပါသည်။ နောက်ဆုံးတွင်ကျွန်ုပ်တို့သည်သူတစ်ပါးအား ပို၍ ကောင်းမွန်သောပြောဆိုမှုများကိုသက်ဝင်လှုပ်ရှားစေရန်ကြိုးစားခြင်းအားဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့အားချစ်သောသူမည်သူမဆိုကျွန်ုပ်တို့ကိုထောက်ပံ့ရန်ထိုနေရာတွင်ရှိနေလိမ့်မည်ဟုခံစားရသည် နေ့တိုင်းနေ့တိုင်းလိမ်ပြောတာကငါတို့ကိုအကောင်းဆုံးပေးတဲ့ဘဝကိုသက်သာစေတယ်
GUILLERMO CONCHA သို့ပြန်ပြောပါ
ခွင့်လွှတ်ပါစိတ်မကောင်းပါဘူး ,မင်းကိုချစ်တယ် ! ကျေးဇူးတင်ပါတယ် ; သူတို့ဟာမှော်စကားတွေဖြစ်တယ်၊ လူအများစုကဘာကြောင့်သူတို့ကိုပြောဖို့ခက်ရတာလဲဆိုတာကိုငါနားလည်ဖို့ခက်ခဲတယ်။ ဒါတွေကတကယ့်စိတ်လှုပ်ရှားမှုပါ။ နှလုံး၊ စိတ်ဓာတ်၊ စိတ်ဝိညာဉ်ကိုပျောက်ကင်းစေပြီးကျွန်ုပ်တို့၏ကိုယ်ပိုင်ဖြစ်တည်မှုကိုအားဖြည့်ပေးသည်
ဘဝဟာမဟုတ်ပါဘူး။ Ta စစ်ဆေးသည်။ On ရပ်လိုက်လျှင်၎င်းကိုထိန်းပါ။ အသက်ရှင်ပါ
တစ် ဦး ကအပြုံး။ အကောင်းဆုံး။ ပပျောက်ရေး။ အကျပ်အတည်းဆန့်ကျင်ခြင်းနှင့်စိုးရိမ်ပူပန်။ ဘုရားသခင်သင့်ကိုကောင်းချီးပေးပါစေ
အတွေးများ အပြုသဘော သူတို့ကအစွမ်းထက်ဖြစ်ကြပြီး။ အပျက်သဘောဆောင်သောအားနည်းသူများသည်ဤနေရာနှင့်ယခုအချိန်တွင်အကောင်းဆုံးအချိန်ဟုထင်ကြသည်
ဘဝဟာချိုမြိန်တယ် ငါတို့ခါးသီးတယ်။ အားကောင်းနေပြီ ကောင်းပါတယ် နှင့်မကောင်းတဲ့
The ။ တစ်သက်တာ။ မဟုတ်ဘူး သွန်း။ အလို့ငှာ။ နားလည်ပါ။ အသက်ရှင်ရန်လျှင်
ဘုရားသခ။ အရမ်း ကြီးမားသည် အဲဒါငါတို့ပဲ ခွန်အား အဲဒါငါတို့ပဲ အဘယ်သူသည်ဒိုင်း။ ထမြောက်ပါ။ ဦး ခေါင်း။ မေးတယ်
Pura Vida နှင့်သင် ဟုသူကပြောသည်
-Pura Vida y Vos -Paz y Amor - ငြိမ်းချမ်းမှုနှင့်ချစ်ခြင်းမေတ္တာ -
Pura Vida y Vos သို့ပြန်သွားပါ
စန်တီယာဂို Jaramillo Granada ဟုသူကပြောသည်
ဘဝ၌အကောင်းဆုံးအရာများသည်အခမဲ့ဖြစ်ပြီးသင်မမြင်နိုင်ပါ။ အကောင်းဆုံးလူများအဆက်မပြတ်ပြောင်းလဲနေတဲ့နှင့် Self- တိုးတက်အောင်နေကြသည်
Santiago Jaramillo Granada သို့ပြန်သွားပါ
ဘယ်တော့လဲ။ ရှိပြီးသား သင်မပိုနိုင် ဘယ်အချိန်လဲ သင်လုပ်နိုင်သည်။ အရာအားလုံး
ဒေါသအမျက်ထွက်နေသောသူသည်မည်မျှပင်ထွက်ပြေးပါစေသူ၏မကောင်းမှုအတွက်ကုစားမှုမတွေ့ပါ။ သူဘယ်နေရာမှာပဲရှိရှိအရာရာတိုင်းဟာအရာရာတိုင်းနဲ့တူနေတယ်။ ဘာမှအသစ်မရှိဘူး၊ သူနဲ့အတူရှိနေခဲ့တယ်။
လူသားများသည် (မငြိမ်မသက်ဖြစ်ခြင်းသို့မဟုတ်ပျင်းရိငြီးငွေ့ဖွယ်ရာများအကြား) အသက်ရှင်ရန်အန္တာတိကတည်ရှိသည် (o dans la convillions de l'inquiétude, ou dans la léthargie de l'ennui) ။
သေခြင်းသည်ပေးဆပ်ခြင်းနှင့်နေထိုင်ခြင်း၏နိယာမဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်အသက်အတွက်မဟုတ်ဘဲသေခြင်းအတွက်မိမိကိုယ်ကိုပြင်ဆင်ရမည်။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့လူနေမှုဘ ၀ ဟာတစ်ရက်ပြီးတစ်ရက်သေဆုံးနေပြီးသေခြင်းတရားကိုအနာဂတ်အဖြစ်ရှုမြင်တာဟာမှားယွင်းတဲ့အကြောင်းပဲ။ အဲဒါကများသောအားဖြင့်ပြီးဆုံးသွားပြီ၊ အတိတ်ဘ ၀ ရဲ့အခိုက်အတန့်ကိုသေခြင်းတရားကပိုင်ဆိုင်ထားတယ်၊ သေဆုံးသွားပြီ သည်းခံခြင်းအတွက်အလွန်အသုံးဝင်သောအရာသည်တိုတောင်းပြီးလုံခြုံမှုမရှိသောတည်ရှိမှုကိုအမြဲတမ်းစဉ်းစားနေသောကြောင့်ဖြစ်သည်။ လုပ်ဆောင်မှုတိုင်း၌လူသည်သေခြင်းကိုထည့်တွက်ရမည်။ သေခြင်းသည်လူကိုလွတ်လပ်မှု၊ လုံခြုံမှု၊ ထာကိုရရှိစေသည်။ သို့သော်သေခြင်းနှင့်အတူသေခြင်းတရားအပါအ ၀ င်အရာအားလုံးအဆုံးတိုင်သွားသည်။ အကယ်၍ သူမသည်နောက်ဆုံးသောသူဖြစ်လျှင်ဒုစရိုက်သည်မကောင်းမှုကြီးပင်။
အလင်း၏စစ်သည်တော်တစ် ဦး အနေဖြင့်အချိန်ကိုဖြုန်းတီးခြင်းမပြုဘဲဖြည့်ဆည်းရန်ကြမ္မာရှိသည်။
ဘဝ၊ ဒါကိုပေးဖို့အရမ်းခက်တယ်၊ ဒါကိုထုတ်ဖို့အရမ်းလွယ်တယ်
Walker ။ မရှိ။ လမ်းမ လုပ်တယ် လမ်းလျှောက်တဲ့အခါငါလမ်းလျှောက်တယ်
ငါနားထောင်တာ - ငါယူတဲ့အရာ - ငါပစ်လိုက်တဲ့မကောင်းတဲ့အရာ၊ ငါသရုပ်ပြပြီး ECHOS နဲ့
The ။ တစ်သက်တာ။ အံ့ It's စရာပါ ဟုတ်တယ်။ ကျွန်တော်မသိပါဘူး။ သူကသူ့ကိုကြောက်တယ်
သင့်အနေဖြင့်ဆေးရုံသို့သွားရန်သင်သံသယရှိပါက၊ သင့်အားကျန်းမာရေးနှင့်ညီညွတ်လိုသူများစွာရှိပါသလောဘဝနှင့် ပတ်သက်၍ ဘယ်သောအခါမျှမတိုင်ကြားပါနှင့်။
Jackson AGUILAR ဟုသူကပြောသည်
မည်သူသည်စကားပြောရမည်ကိုမည်သို့သိနိုင်မည်၊ မည်သို့ကျိုးကြောင်းညီညွတ်ရမည်၊ သို့သော်မည်သူမည်ဝါဖြစ်သည်၊ သိသည်၊ ဖတ်ပါ၊ ရေးသည်၊ အလွန်နည်းသည်၊ Jackson AGUILAR ကိုမည်သို့နားလည်ရမည်နည်း။
JACKSON AGUILAR သို့ပြန်ပြောပါ
ဘဝ၏လှည့်ဖျားများနှင့်လှည့်ကွက်များ၊ သင်လှည့်လည်ခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ သင်သိထားသင့်သည်မှာအခြားအရာများသည်သင်နယ်ပယ်ကဲ့သို့ပင်ဖြစ်လိမ့်မည်။ အာရှရှိပုံပြင်ကြည့်ရှုပြီးသင်မည်သည့်နေရာတွင်ရှိနေသည်ကိုသိရှိရန်။
သင်လဲလျှင်ထရပ်ပါ။ သငျသညျသွားရတဲ့အခါ။ သင်ဆက်လုပ်သည့်အခါသင်ရောက်ရှိမည်။ မင်းသွားရမယ့်နေရာကိုရောက်တဲ့အချိန်မှာစောင့်ပါ။ အကောင်းဆုံးကတော့မလာသေးဘူး။
ဒီဘဝမှာ သင်တစ်ယောက်တည်းပဲ ပုဂ္ဂိုလ်။ ဒါကသင့်ကိုလုပ်နိုင်တယ် သင်၏တာဝန်သည်သင်၏ပျော်ရွှင်မှုဖြစ်သည်
အင်အားစု။ စွမ်းအင်။ ဘုရားသခငျ၏။ အရာအားလုံးရေကြီးပြီးထိုးဖောက်သည်တစ် ဦး တည်းမဟုတ်ပါဘူး။ စကြဝuniverseာတစ်ခုလုံးသည်တဆက်တည်းဖြစ်သည်။ ငါ့ကို Omn who in pos in om om om om om om om om om om om om om om om the the the om om the om om om om om om om om om om om om om om om om om om om om om om om om om om om om om om om om om om om om ငါ့ကိုနှစ်သိမ့်ပြီးနေထိုင်သောသူ၌။ မင်းကိုလမ်းပြတယ် လက်ဖက်ရည်။ သင့်ကိုအလင်းရောင် ပေး၍ ကာကွယ်ပါ။ အေးဆေးနေပါ။ The ။ စွမ်းအင်။ အဆုံးမဲ့ စကွဝာ၏။ အဲဒါအတွင်းမှာပါ မင်း မင်းနဲ့အတူ။ မျက်နှာသာ
အလို။ သူငယ်ချင်းတွေနဲ့မျှဝေဖို့အကြံဥာဏ်တွေကိုအမြဲရှာခဲ့တယ်။ ထိုအခါငါဒီစာမျက်နှာကိုချစ်၏။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်
“ ငါဘယ်ကလာတယ်ဆိုတာဘယ်တော့မှမမေ့ဘူး။ အဲလက်စ်
လူတိုင်းလုပ်နိုင်သည့်ခါးသီးသောဘဝကိုနေထိုင်ပါ။ သင်၏ဘဝကိုရည်ရွယ်ချက်ဖြင့်ထုတ်လွှတ်ခြင်းသည်သင်ယူရမည့်အနုပညာတစ်ခုဖြစ်သည်။ ဆုတ်ယုတ်မှု၏စုံတွဲတစ်တွဲမလုံလောက်ပါ။
ရွှေစွမ်းအားကြွယ်ဝမှု။ သေခြင်းတရား။ သင်စွန့်ခွာရန်ရှိသည်။ ကောင်းကင်ဘုံသို့အကျွန်ုပ်ရောက်ပါပြီ။ သင်သည်သူတို့အားပေးသည်ကိုယူပါ။ ကျန်ရှိနေသော
Jonny Gamarra Puente ဟုသူကပြောသည်
Jhonny Gamarra Puente က“ လူသားတွေဟာနှလုံးသားကိုမမြင်နိုင်ဘူး၊ သူတစ်ပါးရဲ့အတွေးတွေကိုမဖတ်နိုင်ကြဘူး
Jhonny Gamarra Puente အားစာပြန်ပါ
Marinela rocher ဟုသူကပြောသည်
လူတစ် ဦး သည်သူ၌ဖြစ်ပျက်သမျှသောအရာများအားလုံးကိုအမြဲတမ်းညည်းညူနေသည်။ သူဘာကြောင့်လဲ၊ သူ့အသက်တာပြောင်းလဲသွားလျှင်ပင်၊
ငါမင်းနဲ့မင်းရဲ့မိသားစုကိုကူညီနိုင်ဖို့ကူညီပေးချင်တယ်။ DANIELSON ငါမှာသတင်းအချက်အလက်တွေအများကြီးရှိတယ်။ အဲဒါကိုသတိမထားမိဘဲသင်ဟာအဲ့ဒီထဲကနေထွက်လာလိမ့်မယ်။ ငါ့ကိုရှာပါ x Fb
ခင်ပွန်း Nela Rocher
Marinela Rocher အားပြန်ပြောပါ
Marinela: ငါ့ကိုကူညီချင်တဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်၊ ငါဟာဘယ်လူမှုရေးကွန်ယက်မှမပါဝင်ပါဘူး၊ ကျွန်မရဲ့အီးမေးလ်ကတော့ danielsonscott64 @ gmail.com၊ သင့်ကိုစိတ်ရင်းမှန်နဲ့ကူညီချင်သူကိုတွေ့ရတာအမြဲတမ်း ၀ မ်းသာပါတယ်။
ဖြစ်နိုင်ပါတယ် မင်္ဂလာ။ ထာဝရ။ သူ့ကိုသိစေပါ။ ပျော်ရွှင်ပါစေ။ အရာအားလုံးနှင့်အတူ
မရှိပါ။ နွေ ဦး ။ မရှိရင်။ ပန်းပွင့်။ နွေရာသီမဟုတ်ပါ။ မရှိရင်။ အရောင်များ။ လူမျိုးရေးခွဲခြားမှုမရှိဘဲဆောင်း ဦး ရာသီမပါဘဲဆောင်းတွင်း။ နှင်းနှင့်အအေး
Marinela: ကျွန်ုပ်၏အထူးအမှု၌စိတ် ၀ င်စားခြင်းအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါသည်။ ဤအဖြေကိုမတွေ့ရသေးပါ။ သိပ္ပံနှင့်ဝိညာဉ်ရေးရှာဖွေမှုတွင်ကျွန်ုပ်သည်အကူအညီတောင်းခံခဲ့သည်။ ကျွန်ုပ်တို့တွင်အရိုးအထူးကုဆရာဝန်၊ ရူပဗေဒပညာရှင်၊ psychoanalyst, ဇီဝအင်ဂျင်နီယာဆရာဝန်၊ အထွေထွေရောဂါကုဆရာဝန်နှင့်အထူးကုဆရာ ၀ န်။ ကျွန်ုပ်သည်လူမှုရေးကွန်ရက်၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုမဟုတ်သော်လည်းကျွန်ုပ်၏အီးမေးလ်မှဤအကူအညီကိုလက်ခံရရှိနိုင်ပါသည်: danielsonscott64 @ gmail.com, ကျွန်ုပ်၏ဖုန်းနံပါတ် 3104807374. နောက်တစ်ကြိမ်ကျေးဇူးတင်ပါသည် Daniel Cortes
အနာဂတ်။ ညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်။ ပြီးတော့အတိတ်ကကျွန်တော်တို့ကိုချည်နှောင်ထားတယ်။ ကြည့်ပါ ဘာလို့လဲဆိုတော့ငါတို့ကိုလွတ်မြောက်စေလို့ပဲ ပစ္စုပ္ပန်
သေးငယ်သောအရာများ၊ များသောအားဖြင့်အရေးအကြီးဆုံးမှာ ကျွန်ုပ်တို့၏ဘဝကိုမှတ်သားဖော်ပြသည့်နှင့်သူတို့မှတ်ဥာဏ်သည်ကျွန်ုပ်တို့လိုက်လျှောက်ရမည့်လမ်းတွင်ကျွန်ုပ်တို့နှင့်အတူလိုက်ပါကြောင်းအသေးစိတ်အချက်အလက်များ။ ချစ်ခြင်းမေတ္တာနှင့်ချစ်ခြင်းမေတ္တာကိုရှာဖွေနေသည်ဆိုလျှင်ကျွန်ုပ်တို့တည်ရှိခြင်းအတွက်ချမှတ်ထားသောအစီအစဉ်နှင့်အစီအစဉ်သည်အသုံးမ ၀ င်ပါ။ ထိုအချိန်ကတည်းက၎င်းတို့သည်မည်သည့်လမ်းကြောင်းသို့ ဦး တည်သင့်သည်ကိုဆုံးဖြတ်မည့်သူများဖြစ်လိမ့်မည်။
ငါကြယ်တွေကိုကြည့်လိုက်တယ်၊ ညမှာမှောင်မိုက်နေတဲ့အချိန်မှာနိုးနေနိုင်စွမ်းနဲ့ကြယ်တွေနဲ့ပျော်ရွှင်တဲ့မျက်နှာကြားမှာလင်းနေတဲ့ညရဲ့လှပတဲ့အလင်းရောင်ကိုသာခံစားချင်တဲ့ညမှာလင်းနေတဲ့အလင်းရောင်ကိုငါကြည့်နေတယ်။ ဘဝ၏နေ့စဉ်နိုးကြားမှု၏နေ့ရက်တိုင်းတွင်အလင်းအသစ်တစ်ခုကိုလက်ဆောင်တစ်ခုပေးသောဤအာကာသ၏ဂုဏ်အသရေကိုကျွန်ုပ်တို့အားသတိရစေခြင်း
ဆလင်ဒါ pazuzu ဟုသူကပြောသည်
Cynder pazuzu အားပြန်ပြောပါ
ဘဝဟာ shit မဟုတ်ပါဘူး Shits တွေဟာမင်းရဲ့ဘဝကိုမင်းဖျက်ဆီးပစ်လိုက်တဲ့လူတွေပါ။ သူတို့ကိုလုပ်ဖို့ခွင့်မပြုပါနဲ့ !! မင်းမှာအဲဒီဆန္ဒရှိဖို့၊ မင်းကိုမကျေနပ်တာကိုရပ်တန့်ဖို့၊ ကိုယ့်အတွက်အသုံးဝင်တဲ့အရာတစ်ခုလုပ်ဖို့၊ သင်ကြိုက်နှစ်သက်ရာကိုလုပ်ဖို့၊ သူတို့မှာထင်မြင်ချက်မပေးဖို့၊
မည်သူမျှဘဝသည် shit ဖြစ်သည်ဟုမပြောနိုင်ပါ။ မည်သည့်အခါကမျှမနေထိုင်ခဲ့ဖူးပါ။ ချစ်ခြင်းမေတ္တာကိုမခံစားနိုင်ခြင်းသို့မဟုတ်နေဝင်ချိန်တစ်ချိန်ချိန်တွင်လူသားတစ် ဦး အတွင်း၌စိတ်ရှုပ်ထွေးခြင်းများမခံစားရနိုင်ပါ။ သို့သော်၎င်းပြcanနာများကြောင့်မဟုတ်ပါ။ ဘ ၀ ကိုစုပ်ယူတယ်လို့ပြောလို့ရတယ်။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒါကကိုယ့်ကိုယ်ကိုအဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုနိုင်တဲ့အဓိပ္ပာယ်ပဲ။ ဒီဟာကငါတို့ဘဝမှာဒီအကြီးမြတ်ဆုံးအရာဖြစ်တယ်။ သူမနေ့တိုင်းဒီဟာကအထူးအဆန်းဖြစ်တယ်။ ဒီလူတစ်ယောက်တည်းအတွက်ကောင်းတဲ့လက်ဆောင်ပဲငါသူ့ကိုပြောင်ပြောင်တင်းတင်းပြုံးပြတယ်။ သူခံစားနိုင်သည့်ရွှင်လန်းမှုနှင့်အတွင်းပိုင်းကိုသာမြင်တွေ့ရမည်ဖြစ်ပြီးသူအတွင်း၌ပျော်ရွှင်မှုအတွင်း ၀ င်လာတော့မည်ကိုမြင်တွေ့ရလိမ့်မည်။ ဤစကြဝuniverseာတွင်အကြီးမြတ်ဆုံးဘဝသည်ကျွန်ုပ်တို့ခံစားနိုင်စွမ်းရှိခြင်းကြောင့်လူတိုင်းတတ်နိုင်သောကြောင့် အကောင်းဆုံးကိုရှာရန်နှင့်သင်မည်သူမည်ဝါဖြစ်ကြောင်းကိုသင်၏အဓိပ္ပာယ်ကိုရှာပြီးကြီးမြတ်မှုနှင့်အမှားကိုနားလည်သဘောပေါက်ရန်နှလုံးသားမှမျှော်လင့်သည်။ အမှန်တရား
ရိုးရိုးလေးနှုတ်ခွန်းဆက်စကား၊ ရိုးရိုးလေးပြုံးပြီးဝေမျှနိုင်ခြင်း၏ပျော်ရွှင်မှုကိုကျွန်ုပ်တို့နေ့တိုင်းမှတ်မိကြပါစို့။ ကျွန်ုပ်တို့သည်အသက်ရှင်နေပြီးကောင်းကျိုးများနှင့်မကောင်းမွန်ပုံမပေါ်သော်လည်းကျွန်ုပ်တို့မည်သူမည်ဝါဖြစ်ကြောင်းနားလည်သဘောပေါက်ကြောင်းသတိရစေပါ မိမိကိုယ်ကိုတစ် ဦး ဖြစ်ရခြင်းနှင့်၎င်းတို့အချင်းချင်းမရှိကြဟုယုံကြည်သူများနှင့်အမှန်တကယ်တွေ့ဆုံနိုင်ခြင်းအတွက်ပျော်ရွှင်မှုကိုမဆုံးရှုံးပါစေနှင့်။ ကျွန်ုပ်သည်ယနေ့ကျွန်ုပ်၏လက်ရှိအိပ်မက်ဖြစ်ပြီး၎င်း၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုစီတွင်ကျွန်ုပ် caress တစ်နေ့တာရဲ့ချိုမြိန်မှုကိုခံစားရခြင်းကြောင့်တစ်ခါတစ်ရံတွင်ပါ ၀ င်ပတ်သက်နေသည်၊ ၎င်းကိုဖွင့်ရန်ခက်ခဲသည်။ သို့သော်၎င်းသည်ဖွင့်သောအခါ၊ ချိုသောအရာသည်လျင်မြန်စွာမသွား၊ နေ့ရက်များစွာကျန်ရှိနေသည်။ နေ့တိုင်းသူတို့ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်ပျော်မွေ့နေကြသောဘဝ၏ချိုမြိန်မှုကိုသတိရပြီးကြွင်းသောအရာသည်အပေါ်ယံသာဖြစ်သည်
၎င်းသည်ကောင်းမွန်သောအခါပြောဆိုရန်နှင့်ထင်မြင်ချက်ပေးရန်အလွန်လွယ်ကူသည်၊ သို့သော်မည်သည့်အကြောင်းပြချက်ကြောင့်မဆိုမကောင်းသောအခါကျွန်ုပ်တို့၏ဘဝကိုအကောင်းမြင်ရန်ခက်ခဲသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏စိတ်ဆင်းရဲမှု၏အဓိကအစိတ်အပိုင်းသည်အဘယ်အရာဖြစ်ကြောင်းနှင့်ထိုအဖြစ်မှန်မှကြိုးစားရန် ဘဝမှာစိတ်ကျဝေဒနာနှစ်မျိုး၊ စိတ်ကူးစိတ်သန်းပြproblemsနာများ - ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဟာမှားယွင်းတဲ့အကြောင်းပြချက်မရှိဘဲလူမည်းဘဝကိုမြင်တွေ့ရပြီး၊ ဒီလူတွေထဲမှာဘာကြောင့်ဒီလူများ၏ serotonin နိမ့်နိမ့်နိမ့်များတုန်ခါမှုဖြစ်ပေါ်နေသလဲဆိုတာပါပဲ။ အကြောင်းရင်းမှာတိတိကျကျ၊ ၎င်းသည်ချစ်မြတ်နိုးရသူတစ် ဦး ဆုံးရှုံးခြင်း၊ သင်၏ခွေးသေဆုံးခြင်း၊ စီးပွားရေးဆုံးရှုံးမှုစသည်တို့ကဲ့သို့သောအခြေအနေမျိုးနှင့်ဆက်စပ်နေသည်အကြောင်းအရင်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ တစ်စုံတစ် ဦး ကဘဝကိုစုပ်ယူသည်ဟုဆိုပါကကြိုးစားကြည့်ကြပါစို့ သူတို့ရဲ့အကြောင်းပြချက်ကိုနားလည်ရန်နှင့်သူ၏ဝန်ခံချက်ကိုပြင်းပြင်းထန်ထန်ဖိနှိပ်ခြင်းမပြုရန်။
ဒီမှာတစ်ခုတည်းသောအရာကအကောင်းမြင်ခြင်း၊ သင့်ကိုအားပေးတဲ့အရာတစ်ခုခုကိုဖတ်နိုင်ခြင်းဖြစ်သည်။ ငါသည်ဤစာမျက်နှာကိုဖွင့ ်၍ ဘဝသည် shit ဟုပြောသူတစ် ဦး နှင့်မတွေ့လိုပါ၊ အကြောင်းမှာနေ့တိုင်းအိပ်ရာမှထ။ အရာရာကိုရင်ဆိုင်နိုင်ရန်သင် shit ၏ဘဝရှင်သန်နေကြောင်းသင့်ကိုသတိပေးရန်မလိုဘဲနေ့စဉ်ရုန်းကန်နေရသောကြောင့်ဖြစ်သည် ။ ငါအဲဒီလိုမလိုချင်ဘူး၊ ဒါကြောင့်ငါဒီကိုရောက်လာခဲ့တာ၊ မှတ်ချက်တွေကပိုလို့ပိုများတယ်၊ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့မင်းတို့ကငါတို့မှားတာကိုလုပ်ဖို့ဒါမှမဟုတ်မလုပ်ဖို့ကိုသင်ထင်စေတယ်။ ၎င်းတို့ကို Self- Help အရင်းအမြစ်များဟုခေါ်သည်။ ၎င်းသည် Self-ဖျက်ဆီးသည့်အရင်းအမြစ်များဖြစ်သည်။ မင်းကလူတွေကိုနားလည်ပေးရမယ်ဆိုတာငါနားလည်တယ်၊ ဒါပေမယ့်ငါတို့အားလုံးကပြourနာတွေကိုပြောပြမယ်ဆိုရင် ... အဲဒီစာရဲ့စာမျက်နှာကမှားသွားလိမ့်မယ်။
လူတိုင်းလို !! သင်၏ဘဝကိုကြည့်ရှုခြင်းနည်းလမ်းကိုပြောင်းလဲရန်နှင့်သင့်ပတ် ၀ န်းကျင်ရှိလူများ၊ အကောင်းမြင်သူများထံမှအကူအညီရယူရန်ကြိုးစားပါ။ ၎င်းသည်သင့်အားကူညီလိမ့်မည်။ သို့သော်အထက်တွင်သင်၏ဘဝအမြင်ကိုပြောင်းလဲရန်သင်ဘယ်နေရာမှမဆိုခွန်အားရယူပါ၊ သင်မပြုလုပ်ပါက၊ သင်ပြောင်းလဲရန်မကြိုးစားလျှင်သင့်ပျော်ရွှင်မှုကိုရှာဖွေရန်ခက်ခဲပါသည်။ သင်၏ပြaနာကိုဖြေရှင်းရန်သင်၏သဘောထားသည်အလွန်အရေးကြီးသည်၊ သင်ဖြေရှင်းရန်ကြိုတင်ခန့်မှန်းမှုရှိရမယ်၊ ပြီးတော့ဖြေရှင်းချက်ဆီသို့ ဦး တည်ပါ။ သင်ရှုပ်ထွေးလျှင်သင်မည်သည့်လမ်းကိုသွားမည်ကိုမသိလျှင်၊ ငါပြောခဲ့သကဲ့သို့သင်ထင်လိမ့်မည်ဟုသင်ထင်သောလူမှအကူအညီတောင်းပါ။ အရာရာသည်သင့်အတွက်ကောင်းမွန်မည်ဟုမျှော်လင့်ပါသည် !!
ပျော်ရွှင်မှုကိုသင်၌ရှိကြောင်းနှင့်ဤကမ္ဘာတွင်သင်မည်သူမည်ဝါဖြစ်ကြောင်းအမှန်တကယ်ခံစားရသည်ကိုသာပြောနိုင်ပြီးသင်ပြောခဲ့သည့်တစ်နေ့ကျရင်မင်းကိုပိုပြီးစိတ်ပျက်စေလိမ့်မယ်ဆိုတာကိုသင်တွေ့ရလိမ့်မယ်။ ဘာကြောင့်ပြောတာလဲ၊ တစ်ခါတစ်ရံ၌ဤအရာကိုခံစားရစေသည့်နှောင်ကြိုးများထုတ်လွှတ်ခြင်းကိုခံစားပါ။ ယနေ့သင်ပြုံးပြခြင်းအားဖြင့်သင်မှန်ထဲကိုကြည့်ပြီးသင်ဤမည်သည့်နေရာသို့ထူးခြားသည်ကိုသင်မြင်တွေ့ရပြီ ဖြစ်၍ သင့်အားရှာတွေ့ရန်သင့်အားစကြာ ၀ ofာ၏မှော်အနည်းငယ်ပို့ပေးလိုက်သည်။ မင်းဘယ်လောက်များများသတိရလဲ မင်းကိုစိတ်ထိခိုက်စေပြီးစိတ်ရှုပ်ထွေးစေတဲ့အတွက်ငါတို့တည်ရှိနေတာကိုမေ့သွားလို့ငါတို့အချင်းချင်းမတူကြဘူး၊ ဒီလောကရဲ့ထင်မြင်ယူဆချက်တွေကိုလေးစားဖို့လိုတယ်ဆိုတာသဘောတူတယ်။ တစ် ဦး နှင့်တစ် ဦး ကူညီနိုင်ပါ။ အကယ်၍ အကယ်၍ သင်သည်ယုတ္တိမရှိဘဲတစ်ခုခုပြောသောသူဖြစ်ပါကသင့်ကိုသူတို့မစွန့်ခွာလိုပါက၊ သတ္တဝါအားလုံးသည်တစ် ဦး နှင့်တစ် ဦး လိုအပ်ကြောင်းကိုနားလည်နိုင်ရန်နှင့်ကျွန်ုပ်တို့နှင့်မျှဝေရန်အမြဲတမ်းအမြဲတမ်းရှိလိမ့်မည် အခြားသူများကမထင်ရသော်လည်းပင်အကောင်းဆုံးကိုကျွန်ုပ်တို့အားမဖျက်ဆီးရန်ကူညီခြင်းဖြင့်စတင်ခြင်းဖြစ်သည်
တောင်များနှင့်ထိပ်များအကြားငါသန့်ရှင်းစင်ကြယ်သောဤအမွှေးနံ့သာကိုရှူရှိုက်နိုင်စေရန်တဖြည်းဖြည်းလျှောက်လှမ်းနေရခြင်းသည်ဤမျှစိတ်ငြိမ်သက်မှုခံစားရစေပြီးအထွတ်အထိပ်များကိုမြင်တွေ့ရခြင်းကကျွန်ုပ်အားဤတွင်ဆက်လက်လုပ်ဆောင်ရန်ရယ်မောစေသည်။ ပင်လယ်ရေသည်ကျွန်ုပ်ကို၎င်း၏ပင်လယ်ကြားရှိခံစားမှုကိုဖြစ်စေသည်။ အာကာသနှင့်ကျွန်ုပ်သည်သဘာဝတရား၏ရိုးရိုးရှင်းရှင်းဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်၏ ၀ မ်းမြောက်ခြင်းကိုဤစကြာ ၀ thanာထက်နေ့စဉ်နေ့တိုင်းပိုမိုကြီးမားစေသည်၊ ကျွန်ုပ်တို့၏တည်ရှိမှု၌တည်ရှိနေခြင်းကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့နှင့်မည်သူမည်ဝါဖြစ်သည်ကိုလက်ခံနိုင်ခြင်း၏အကြောင်းပြချက်ကိုအကြိမ်ပေါင်းမည်မျှဆုံးရှုံးသည်ဖြစ်စေ၊ ငါတို့ဘယ်သူတွေလဲသူတို့နှလုံးသားထဲကလာတဲ့ပွေ့ဖက်မှုကိုသူတို့ပြသခဲ့တဲ့ပျော်ရွှင်မှုဟာဒီနေ့အလင်းရောင်ပရဒိသုမှာဆက်ပြီးရှင်သန်နိုင်ဖို့အတွက်သာယာတဲ့နေ့ကြီးတစ်ခုပဲ။ သင့်ကိုမမေ့နိုင်ပြီ၊ မင်းလုပ်မယ်လို့ငါမျှော်လင့်ပါတယ်။ မင်းရဲ့အတွင်းစိတ်ကိုကြည့်ပြီးမင်းကိုဘယ်သူတွေချစ်နေတယ်ဆိုတာကိုနေ့တိုင်းပြုံးနေတာကိုမမေ့ပါနဲ့၊ ငါရေးရင်အရေးမကြီးဘူး၊ မင်းရဲ့အကောင်းဆုံးအပြုံးနဲ့နေ့တိုင်းခံစားရတယ်၊ မင်းကိုပေးပြီးမင်းကိုအရင်ပေးမယ်။ မင်းလိုချင်တာကိုမင်းရှာတွေ့မယ်လို့မင်းမျှော်လင့်ပါတယ်။ ဟုတ်ပါတယ်၊ ညကြယ်များကသင်၏အိပ်မက်ကိုမီးမောင်းထိုးပြပြီးနေ့၏အလင်းသည်သင်၏တည်ရှိမှု၏နေ့ရက်တိုင်းကိုအကောင်းဆုံးပြုံးနိုင်ကြောင်းသင်တွေ့ရှိလိမ့်မည်
ဘဝအဆင့်တိုင်းတွင်ရည်ရွယ်ချက်ရှိသည်။ နွေရာသီမရှိရင်ဆောင်းကိုဘယ်တော့မှမမြင်ဘူး ညဉ့်မရှိဘဲနေ့။ မနေ့ကဒီနေ့တည်ဆောက် ဒီနေ့မနက်ဖြန်ဆောက်မယ်
တစ်ခုလုံးကိုဖန်တီးရန်အချိန်တိုင်းလိုအပ်သည်။ အရာရာတိုင်းသည်အရေးကြီးသည် !!!
“ LIFE ဆိုတာ RAINBOW !! !! အရာအားလုံးဟာပုပ်စပ်နေတယ်၊ ​​ဒါပေမယ့်အနက်ရောင်မဟုတ်ဘူး။ ”
အရောင်တစ်ခုစီသည်စိတ်အခြေအနေ၊ ခဏတစ်ခု၊ ကျွန်ုပ်တို့ဖြတ်သန်းနေသောအခြေအနေတစ်ခုဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့်မှောင်မိုက်သောအရောင်များထဲသို့မကျရောက်စေရန်၊ ကျွန်ုပ်တို့သည်ချက်ချင်းထွက်လျှင်၊ ဘာမျှမဖြစ်သကဲ့သို့ကဲ့သို့ပြုံးပါ။ ဘဝကအခွင့်အလမ်းအသစ်များနှင့်လည်းငါတို့ကိုပြုံးလိမ့်မည်။
အခြေအနေတိုင်း၌ရှိနေစဉ်ကျွန်ုပ်တို့ဘဝ၏အဆင့်တိုင်း၊ အချိန်တိုင်းတွင်ပြုံးရွှင်စွာပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်နေရမည်။ မနက်ဖြန်ဘာဖြစ်လာမည်ကိုမသိသောကြောင့်ဖြစ်သည်။
ငါဒံယေလသဘောတူတယ်။ ငါတို့ဒီလူဘယ်အခြေအနေရောက်နေတယ်ဆိုတာမသိဘူး၊ သူဟာတကယ်ကိုနှစ်သိမ့်မှုရှာနေတဲ့အချိန်မှာသူဟာဒီပစ္စည်းကိုထုတ်လွှင့်တဲ့နေရာမှာသုံးခဲ့တယ်။ ဒါကဖြစ်ပျက်နေတယ် ... ပြီးတော့သူမအတွက်အခြေအနေကသိပ်မကြာသေးခင်ကမှအားကောင်းနေတယ်၊ ​​သူမအတွက်ဘာအကူအညီမှရှာမတွေ့ဘူး၊ ဒါကြောင့်ဒီအသုံးအနှုန်းကိုပြောရမယ်ဆိုရင်ဒီကိစ္စမှာငါတို့အကောင်းဆုံးကိုပေးဖို့ပါ ဒီလူကိုဘဝအပေါ်သူ၏ရှုထောင့်ကိုပြောင်းလဲစေရန်သို့မဟုတ်ကြိုးစားအားထုတ်ရန်နှင့်တစ်စုံတစ်ရာကိုအကဲဖြတ်ရန်နှင့်ကဲ့ရဲ့ရှုတ်ချရန်မပြုလုပ်ရန်ကြိုးစားခြင်း၊ ဘာလို့လဲဆိုတော့ငါတို့ရှိသမျှသည်အလွန်ခက်ခဲသောအခြေအနေများကိုဖြတ်သန်းသွားနိုင်သည်ဟုထင်မြင်မိသည်၊ ဒါကငါပိုပြီးကိုင်တွယ်နိုင်အချည်းနှီးဖြစ်၏
ဒီလူနည်းနည်းကိုကျွန်တော်ပြောနိုင်တာကသူကသူပြောတာကိုလက်ခံပြီးအလိုတော်ရှိရင်သူကဒီဟာကနေထွက်နိုင်မယ်၊ သူလုပ်နိုင်တဲ့အစွမ်းကိုရှာဖို့ဖြစ်တယ် စာမျက်နှာ။ ပြီးတော့မင်းတို့ဟာပြwithနာတွေနဲ့တစ်ခုတည်းမဟုတ်ဘူးလို့အမြဲတမ်းအမြဲတမ်းစဉ်းစားပါ။ ငါတို့အားလုံးမှာပိုကြီးပြီးသေးငယ်တဲ့အရာတွေရှိတယ်။ ဒါပေမယ့်ဘုရားသခင်ကသင့်ကိုဒီအခြေအနေမျိုးမှာထားမယ်ဆိုရင်အဲဒါကိုသင်ကိုင်တွယ်နိုင်လို့ပါ။ မတတ်နိုင် ယုံကြည်မှုနှင့်အလိုတော်များစွာရှိရုံမျှမက ... ထာဝရတည်မြဲသောအရာမရှိ ... အားလုံးဖြစ်ပျက်နေသည်။
မင်းရဲ့ vibes တွေကိုငါပြောင်းလဲလိုက်ရင်စိတ်မကောင်းပါဘူး
အမှားများလား။ ငါတို့ရှိသမျှသည်ထိုအရာကိုကျူးလွန်ပြီးဖြစ်သည်။ အရာရာတိုင်းတွင်အဖြေတစ်ခုရှိသည်။ သင်စိတ်သောကရောက်နေသောကြောင့်ဖြစ်သည်။ သင်၏အခြေအနေမှာသင်ရှာမရနိုင်သောကြောင့်ဖြစ်သည်။ အဖြေမရနိုင်သည့်တစ်ခုတည်းသောအရာသည်သေခြင်းကိုယ်နှိုက်ဖြစ်သည်။
အချိန်ရှိသေး၏။ ခွင့်လွှတ်ခြင်းတောင်းခံခြင်းသည်အလွန်အရေးကြီးသည်။ ခွင့်လွှတ်ခြင်းမရသည့်အရာသည်ထာဝရအလေးချိန်ရှိသောအရာတစ်ခုဖြစ်လာသည်။ လုပ်ပါ တကယ်လို့စိတ်မကောင်းဖြစ်ရင်ခွင့်လွှတ်ပါလို့တောင်းပန်ပါ။
အချိန်တန်လျှင်သင့်အားအဖြေပေးလိမ့်မည်။ သင့်ပတ် ၀ န်းကျင်ကိုစီးဆင်းစေပြီးသင့်ကိုနာကျင်စေသည့်အရာကိုချစ်ခြင်းမေတ္တာဖြင့်လက်ခံပါစေ။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီပျက်ပြယ်ပျက်ပြယ်ပေမယ့်ဘာမှ ...
မင်းအတွက်မင်းအတွက်ငါဒီနေ့ထက်ပိုပြီးထွန်းလင်းနိုင်မယ်၊ မင်းအရေးအကြီးဆုံးနဲ့အရေးကြီးဆုံးအချက်ကတော့မင်းဟာမင်းဟာ Negativ မှာနေတယ်ဆိုတာကိုသင်သဘောပေါက်ထားလို့ပါ။ အဲဒါကိုအကောင်းဆုံးနည်းနဲ့တိုက်ထုတ်နိုင်ဖို့သင့်မှာကိုယ်ပိုင်အကြောင်းပြချက်ကိုသိလို့ပါ။ နေ့စဉ်နှေးကွေးနေသော်လည်းအနည်းငယ်ပိုနှေးကွေးသော်လည်းသင်မည်သူမည်ဝါဖြစ်သည်ကိုကြည့်ခြင်းအားဖြင့်ကောင်းသောအမှုပြုသည့်အခါခွင့်လွှတ်ခြင်းကိုတောင်းခံပါ၊ ပိုမိုကောင်းမွန်သောခံစားချက်ကိုဖြစ်ပေါ်စေသောအရာအားလုံးကိုလုပ်ပါ။ သင်သာလျှင်သင်သိနိုင်မှသာအလင်း၏တောက်ပမှုအတွက်ဘယ်တော့မှနောက်ကျမည်မဟုတ်ပါ။ သင်၏အပြုံးနှင့်အတူနေ့စဉ်နေ့တိုင်းနိုးရမည်ကိုသင်သိရန်နှင့်ဒီဘ ၀ သည်အကောင်းဆုံးကိုပေးသည်ဟုခံစားရစေရန်သင့်အားအမြဲတမ်းလင်းစေလိမ့်မည် နေ့တိုင်းနေ့တိုင်းနေ့တိုင်းပိုသာယာလှပတဲ့ရွှင်လန်းမှုအသစ်တစ်ခုကိုသင်ရရှိတဲ့အပြုသဘောဆောင်တဲ့စွမ်းအင်တွေအားလုံးကိုရရှိတဲ့အတွက်မင်းအတွက်နှစ်လိုဖွယ်စွမ်းအင်တွေအများကြီးရရှိခဲ့တယ်၊ ငါ့ရဲ့ဆန္ဒကတော့ဒီနှစ်မကုန်ခင်မှာသင်ဟာအရာအားလုံးကိုသင်နည်းနည်းလောက်လိုချင်သလိုခံစားမိပေမဲ့သင်ခံစားနိုင်မယ်ဆိုတာပါပဲ။
သင်ပြောသမျှအားလုံးကောင်းလိုက်တာ။ အဲဒီစကားလုံးတွေက Cynder ကိုများစွာကူညီလိမ့်မယ်ထင်တယ်။ အရေးကြီးသည်မှာသင်အမှားကိုသင်အသိအမှတ်ပြုပြီး၎င်းကိုသင်၏အကောင်းဆုံးစွမ်းရည်နှင့်ပြန်လည်ပြုပြင်နိုင်ခြင်းဖြစ်သည်။ ငါများသောအားဖြင့်အပြုသဘောရှိသော်လည်း၎င်းသည်ကျွန်ုပ်အားလည်းကူညီနိုင်သည်ဟုထင်ပါသည်။ ရက်စက်ကြမ်းကြုတ်ပြီးသယ်ဆောင်ရန်ခက်ခဲသည့်နေ့ရက်များရှိသည်။ သို့သော်သင်ပြောသည့်အတိုင်းလူများကိုပြုံးရန်နှင့်အပြာရောင်နေ့နှင့်စတင်ရမည်ဖြစ်သည်။ မင်းအနားမှာ ၎င်းသည်အရာအားလုံးကို ပို၍ ခံနိုင်ရည်ရှိစေသည်။ အဲဒီမှာနေသောလူအပေါင်းတို့ကိုကျေးဇူးတင်ပါသည်နှင့်သင်၏သဲစပါးကိုအထောက်အကူပြု။
လက်ရှိတည်ရှိနေတဲ့အဖြစ်မှန်မှာငါတို့အားလုံးတစ်ယောက်ကိုတစ်ယောက်လိုအပ်နေတယ်ဆိုတာခင်ဗျားသိလို့ဝမ်းသာပါတယ်။ အခက်ခဲဆုံးဖြစ်လာသောကြောင့်အခြားနေ့ကခင်ဗျားပြောခဲ့တာကိုဖတ်ရတာစိတ်မကောင်းပါဘူး။ ဒါကြောင့်ခင်ဗျားသိလို့ဝမ်းသာပါတယ်။ ငါတို့ဒီနေရာကိုမဆုံးဖြတ်နိုင်တဲ့အတွက်အချင်းချင်းတစ်ယောက်ကိုတစ်ယောက်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုကျေနပ်မှုရှိအောင်ကူညီဖို့သာကြိုးစားပါ။ ကျွန်တော်တို့ကိုလိုအပ်နေသူတွေကိုဝေမျှနိုင်တာထက်ပိုပြီးရှိတယ်ဆိုတာကိုသိရတာအံ့သြစရာမဟုတ်ပါဘူး။ မနက်ခင်းမှာငါတို့လိုချင်တယ်၊ မလိုချင်ပေမယ့်ငါ့အတွက်အရေးကြီးတဲ့အရာကနှလုံးအကြောင်းရင်းနဲ့လုပ်တာဖြစ်တယ်၊ တခြားအကြောင်းပြချက်တွေကြောင့်မဟုတ်ဘဲမာရီယာ၊ သင့်ရဲ့ဘဝကိုတိုးတက်စေဖို့၊ သင့်ဘ ၀ ကိုအံဝင်ခွင်ကျဖြစ်အောင်စဉ်းစားပြီးသင်မြင်ရလိမ့်မယ် အပြုံးကသူ့ဟာသူအပေါ်တောက်ပနေသည်။
ကျေးဇူးတင်ပါတယ် !! ငါနည်းနည်းရက်စက်တယ်၊ ငါတောင်းပန်ခဲ့တယ်။ အရာရာကိုကြားမှ၊ ကျွန်ုပ်သည်ကောင်းမွန်သောအရာတစ်ခုကြားရန်လိုအပ်သည်။ ဘဝကစို့လာသည်ကိုတွေ့သောအခါငါရူးသွားသည်။ တစ် ဦး ကပွေ့ဖက်ခြင်းနှင့်ကောင်းသောနေ့ကရှိသည် !!
စကြာ ၀ ofာ၏နိယာမများသည်အလွန်ကောင်းမွန်လှသည်။ သင်သည်၎င်းတို့ကိုလေ့လာရန်၊ နားလည်ရန်၊ နားလည်ရန်နှင့်လိုက်နာရန်လိုသည်။
Law 1 ဆိုတာဘုရားသခင့်စည်းလုံးညီညွှတ်မှုဖြစ်တယ်။ အဲဒါကငါတို့အားလုံးတစ်နည်းနည်းနဲ့ဘယ်လိုဆက်နွယ်မှုရှိတယ်ဆိုတာကိုရှင်းပြတယ် ငါတို့ပြုလေသမျှ၊ ပြော၊ စဉ်းစားသမျှသည်ဆက်စပ်နေသည်၊ ငါတို့နေထိုင်သောကြီးမားကျယ်ပြောသောစကြဝinာရှိအခြားသူအားလုံးနှင့်ဖြစ်သည်။ ငါတို့ရှိသမျှသည်တစ်လုံးတည်းဖြစ်သည်။ ငါတို့ရှိသမျှသည်တစ်ဖွဲ့လုံး၏အစိတ်အပိုင်းဖြစ်ကြသည်။ ငါတို့ရှိသမျှသည်အဆက်အစပ်ရှိကြသည်၊ သူတစ်ပါးကိုကျွန်ုပ်တို့ပြုမူဆက်ဆံပုံသည်ကျွန်ုပ်တို့အားသူတို့အပေါ်ပြုမူဆက်ဆံသောကြောင့်၎င်းသည်မှန်သည်။ ကမ္ဘာကြီးသည်တုန့်ပြန်သကဲ့သို့ကမ္ဘာကိုသင်တုန့်ပြန်သကဲ့သို့တုံ့ပြန်လိမ့်မည်။ အခြေအနေတစ်ခုစီကိုဘယ်လိုတုန့်ပြန်သင့်သလဲဆိုတာကိုအရင်စဉ်းစားရပါမယ်။ သင်ထင်၊ ခံစားရ၊ ပြောဆိုပြောဆိုသမျှသည်အခြားအရာအားလုံးအပေါ်သက်ရောက်မှုတစ်ခုနှင့်ဆက်စပ်နေသည်။ ဤနိယာမတရားကပြောနေသည်မှာကျွန်ုပ်တို့သည်ဘုရားသခင်နှင့်အခြားသောလူသားနှင့်သဘာဝတရားသည်တစ်ခုလုံး၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ တစ်ခါတစ်ရံကျွန်ုပ်တို့သည်ထိုအရာကိုကျွန်ုပ်တို့နားမလည်ပါကကျွန်ုပ်တို့ပတ် ၀ န်းကျင်တွင်ဖြစ်ပျက်မှုများသည်ကျွန်ုပ်တို့အပေါ်သက်ရောက်မှုရှိသည်။ လူတစ် ဦး အားကျွန်ုပ်တို့သူ့ကိုကျွန်ုပ်တို့မသိသော်လည်းသူသည်သူရှိနေခြင်း၊ သူယူဆောင်လာခဲ့သည့်သူ၏မကောင်းသောသို့မဟုတ်ကောင်းသောစိတ်ဓာတ်များသို့မဟုတ်သူ၏ကောင်းသောသို့မဟုတ်နိမ့်ကျသောဗီတာမင်များစသည်ဖြင့်ခံစားရသည်။
ထို့ကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်တုန့်ပြန်မှုတစ်ခုစီကိုသတိပြုရန်စတင်သည်။ တစ်စုံတစ် ဦး ကိုထိခိုက်စေခြင်းသို့မဟုတ်ကျွန်ုပ်တို့မလုပ်ချင်သောအရာတစ်ခုခုကိုမလုပ်မိရန်တို့ဖြစ်သည်။
အလွန်ကောင်းတဲ့နေ့ !! မင်းရဲ့နေ့ကိုပျော်ရွှင်စွာမနက်ဖြန်မှာမစဉ်းစားပါနဲ့။ ကောင်းပြီ၊ မရောက်သေးဘူး ... ဒီလင့်ခ်ကိုလိုက်နာသူများအတွက်ကောင်းချီးများနှင့်ကောင်းကျိုးများ😉😉
Octavio Hernandez ဟုသူကပြောသည်
အပြုသဘောဆောင်တဲ့မက်ဆေ့ခ်ျ ၄၀ ဟာအလွန်ကောင်းပါတယ်။ ၎င်းသည်ထပ်မံထည့်သွင်းနိုင်သည်ဟုကျွန်ုပ်ကျိုးနွံစွာယုံကြည်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်မိတ်ဆွေကောင်းများရှာဖွေရန်နှင့်ထိန်းသိမ်းရန်လိုအပ်သည်။
octavio hernandez အားပြန်ကြားပါ
အငယ်တန်း felipe rdriguez Lucero ဟုသူကပြောသည်
"တစ်နေ့ကျရင်မင်းဟာစိတ်ဓာတ်ကျပြီးစိတ်ဓာတ်ကျမယ်ဆိုရင်တစ်ချိန်ကမင်းဟာအားလုံးရဲ့အမြန်ဆုံးသုက်ပိုးပဲလို့ထင်တယ်။ " Groucho မာ့က်စ်။ 🙂
အငယ်တန်း felipe rdriguez lucero မှတုံ့ပြန်ပါ
Cynder pazuzu မင်းရဲ့အခြေအနေတွေပြောင်းလဲနေပြီးမင်းရဲ့ဘဝမှာအရာတွေကနှေးနေတယ်၊ ​​ဒါပေမဲ့မင်းတိုးတက်အောင်လုပ်နိုင်ဖို့အရမ်းကိုအပြုသဘောဆောင်တယ်။ မင်းရဲ့စကားကိုကြားပြီးကံအားလျော်စွာအခြားသူများအားသင်၏စိတ်နှလုံးကိုဖွင့်ဟရန်အပြုံးဖြင့်နေ့ကိုအမှတ်ရမိသည်။
ဘဝရဲ့နိုးထလာတာကမင်းအတွက်ငါ့မွေးချင်းလေးပါ။ မင်းကိုအရုဏ်တက်ချိန်မှာငါ့ကိုပျော်ရွှင်မှုပြေစေဖို့ရယ်ရွှင်မြူးစွာဝေမျှပြီးဒုတိယဘဝရဲ့သောင်းတစ်ထောင်တိုင်းမှာဒီအဖြစ်အပျက်ကိုဆက်လုပ်ဖို့ငါတို့ကိုရွှင်လန်းစေတယ်။ သူမ၏လမ်းကြောင်းအပေါ်
ဖေဖော်ဝါရီ ၁၅ ရက်နံနက်စောစောတွင်အသက်ရှင်နေထိုင်ခြင်းသည် ALFEGRIA နှင့်ပြည့်ဝရန်နှင့်ယနေ့ခေတ်ရှိအပြုံးများအားဘဝ၏အလင်းအားဖြင့်အသက်ရှင်ခြင်းနေ့ရက်တိုင်းကိုခံစားနေရသောကျေးဇူးတော်အားဖြင့်ယနေ့နယူးဇီလန်နိုင်ငံပက်တိုလိုမြို့တွင်ဖြစ်ပေါ်နေသောအပြောင်းအလဲများဖြစ်ပေါ်စေသောနေ့ဖြစ်သည်။ ငါနိုးနေတဲ့နေ့ဆိုတာနေ့တိုင်းနေ့တိုင်းနေ့တိုင်းငါမျက်လုံးတွေဖွင့်လိုက်ပြီ၊ သင့်နိုးနေမှုသည်လည်းအလင်းနှင့်လုပ်ထားနိုင်ပြီး၎င်းသည်လက်ရှိရှိနေခြင်းအားဖြင့်ရှိနေသည်။
ဘဝချောကလက်တစ်သေတ္တာဖြစ်ပါတယ်။ ဘယ်ဟာကိုဘယ်တော့မှမသိဘူး။ ဘဝကမင်းကိုထိတော့မယ်၊ အံ့သြစရာ။ လက်ဖက်ရည်။ ပေး။ တစ်သက်တာ။ ဘဝအတွက်
Manuel Herrera Flores ဟုသူကပြောသည်
Man uel Herrera Flores သို့ပြန်သွားပါ
ဉာဏ်ပညာသည်သိပ္ပံဆိုင်ရာအသိပညာမျှသာမဟုတ်ပါ၊ သို့သော်နေ့စဉ်ပြproblemsနာများကိုမည်သို့ဖြေရှင်းရမည်ကိုသိခြင်းသည်ရင့်ကျက်ခြင်းကိုဖြစ်တည်ခြင်းနှင့်သက်ဆိုင်သည်မဟုတ်ပါ။ ရင့်ကျက်ခြင်းဟူသည်အခြားသူများနှင့်မိမိကိုယ်ကိုနားလည်ခြင်းနှင့်ကုသခြင်းဖြစ်သည်။
ငါသည်ဤအတွေးငါ့ဥစ္စာဖြစ်၏မျှော်လင့်ပါတယ်။ ဘုရားသခင်အားအနုပညာ၊ အသိပညာ၊ အားကစားနှင့်ချစ်ခြင်းမေတ္တာကိုကတိက ၀ တ်ပြုခြင်းသည်အထီးကျန်ခြင်း၏တွန်းအားကိုလျော့ပါးစေသောလူတစ် ဦး ၏သီလနှင့်လက္ခဏာများဖြစ်သည်။ ” Moisés Conde
Moisés Conde အားပြန်ပြောပါ
Carlos Arce ZAMORA ဟုသူကပြောသည်
CARLOS ARCE ZAMORA သို့စာပြန်ပါ
epifanio yupanqui ဟုသူကပြောသည်
Epifanio yupanqui အားပြန်ပြောပါ
yessica pr ဟုသူကပြောသည်
အပြုသဘောဆောင်တဲ့မက်ဆေ့ခ်ျတွေကနေ့စဉ်ဘ ၀ မှာအခြေခံကျတယ်၊ အဲဒါကကျွန်တော်တို့ကိုအားကောင်းစေပြီးခက်ခဲတဲ့အခြေအနေတွေကိုရင်ဆိုင်နိုင်ဖို့နဲ့လူကောင်းတွေဖြစ်ဖို့ကူညီပေးတယ်။
yessica pr အားစာပြန်ပါ
Gerardo Maddonni ဟုသူကပြောသည်
gerardo maddonni အားပြန်ပြောပါ
ALBERTO GUSTAVO ဟုသူကပြောသည်
မိတ်ဆွေဖွဲ့ခြင်းကမခက်ခဲပါ၊ ခက်ခဲသောအရာမှာသူတို့ကိုဆက်ထိန်းထားရန်ဖြစ်သည်။ တစ်ခုတည်းကိုသာထားခြင်းက၎င်းအတွက်ဘဝအတွက်ထိန်းသိမ်းထားခြင်းဖြစ်သည်။
ALBERTO GUSTAVO သို့စာပြန်ပါ
»အာရုံပြောင်းပါ။ ငွေရှာခြင်းမှလူများပိုမိုအမှုဆောင်ခြင်းသို့…လူအများအပြားကိုအမှုဆောင်ခြင်းမှငွေသည် ၀ င်ငွေရရှိလိမ့်မည်။ (၆) ကျွန်ုပ်၏စီးပွားရေးလုပ်ငန်းကိုအာရုံစိုက်ရန်ကောင်းသောနည်းလမ်းဖြစ်သည်။
လေ့လာမှုတွင်ပျော်ရွှင်ပါ၊ အိပ်မက်များကိုအကောင်အထည်ဖော်သောအခါမည်မျှခက်ခဲသည်သို့မဟုတ်မဖြစ်နိုင်ပါစေသင်ကုန်ကျစရိတ်အားလုံးအပေါ်တွင်စွဲမှတ်စွာပျော်ရွှင်ပါလိမ့်မည်။ သင်၏မြင့်မြတ်မှုကိုမည်သူမျှမသိမ်းယူနိုင်တော့ပါ
အသက်တာ၌အကောင်းဆုံးလက်ဆောင်များ, မကြာခဏအလွန်နှိမ့်ချခြင်းနှင့် untidy ထုပ်ပိုးရှိသည်
အားလုံးဆုံးရှုံးသွားပြီဟုသင်ခံစားရသောအခါသင့်တွင်မျက်စိ၊ နှာခေါင်း၊ နား၊ နှုတ်နှင့် ဦး နှောက်ရှိကြောင်းသတိရပါ။
Aguilar jackson ဟုသူကပြောသည်
jackson Aguilar သို့ပြန်သွားရန်
စိတ်နှလုံးသည်မွေးဖွားခြင်းမဟုတ်။ ပိုကောင်းသင့်ဘဝ ... ကဗျာ၏ရှင်ဘုရင်မ
Patricia Mercado သို့ပြန်သွားပါ
Ridols များ ဟုသူကပြောသည်
Leymar Rujano ဟုသူကပြောသည်
ကျွန်ုပ်၏အရွယ်ရောက်ပြီးသောဘ ၀ တွင်အကောင်းဆုံးစွမ်းအင်နှင့်ကြံဆတီထွင်မှုများ၊ ကလေးများကြားတွင်ကျွန်ုပ်နေထိုင်ခဲ့သည်၊ သူတို့သည်စဉ်ဆက်မပြတ်လှုပ်ရှားမှုနှင့်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာသွက်လက်မှုကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်။
leymar rujano သို့ပြန်သွားရန်
Rosa Ruiz ဟုသူကပြောသည်
rosa ruiz သို့ပြန်သွားရန်
၀ န်ခံ ၀ န်ခံခြင်းငှါရဲရဲရဲရဲရဲရဲရဲရဲရဲရဲရဲရဲရဲ့ ၀ မ်းသာမှုလည်းရှိပါတယ်။
Jorge Gomez ဟုသူကပြောသည်
Jorge gomez အားပြန်ပြောပါ
GG သည် JT မှဖြစ်သည်။ knkj bb Ikki uj bb ကောင်းသော bb bvvj JJ JJ JJbJJ JJ bb bvvjbbvvj bbbjj JBbbb bb မရှိပါ kML KML
Guillermo Moreno Gutierrez နေရာချထားပုံ ဟုသူကပြောသည်
Guillermo Moreno Gutierrez အားပြန်ပြောပါ
JOHANNA SALAZAR သို့ပြန်ပြောပါ
Doris Romero ဟုသူကပြောသည်
Doris Romero ကိုစာပြန်ပါ
Angel Mares ဟုသူကပြောသည်
မင်းသူငယ်ချင်းတစ်ယောက်လိုမလိုချင်ဘူး၊ ရန်သူလိုသူ့ကိုမသိဘူး ...
elngel Mares ကိုစာပြန်ပါ
ဆင်းရဲနွမ်းပါးသူများကိုတိရိစ္ဆာန်များအားလူသားများထက်နိမ့်ကျသောတည်ရှိမှု၊ ဆန့်ကျင်ဘက်ပဲဖြစ်တဲ့အခါ ...
ငါဖတ်ခဲ့တဲ့အကောင်းဆုံးအရာများအရတိရိစ္ဆာန်များမှာရိုးရှင်းမှုနှင့်ရိုးရှင်းမှုအရ၊ ပျော်ရွှင်သောလူအနည်းငယ်သာတွေ့ရမှာပါ။ ဘဝဟာလွယ်ကူတဲ့အရာတစ်ခုဖြစ်ပြီးလူသားရဲ့အစွန်းရောက်အတ္တကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အခက်အခဲပေါင်းတစ်ထောင်လောက်ကိုဖုံးကွယ်ထားသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်သဘာဝအားဖြင့်လူကိုစုပေါင်းပြီးစစ်မှန်သောအသိဉာဏ်နှင့် ပတ်သက်၍ နောက်ဆုံးအဆင့်တွင်ရှိရမည်ဟုကျွန်ုပ်တို့အတည်ပြုနိုင်သည်။ ဤ blog အမျိုးအစားကိုဖန်တီးသည့်အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါသည်။
Aurora Nieto ဖြစ်သည် ဟုသူကပြောသည်
သင်လုပ်ချင်တာကိုမပြောပါနှင့်၊ သင်လုပ်နိုင်သမျှကိုလုပ်ပါ၊ ပြုမူလုပ်ဆောင်ပါ၊ စည်းရုံးသိမ်းသွင်းပါ၊ ဆက်သွားပါ။ သင်နှင့်အတူလိုက်ပါ၊ သင့်ကိုအရှုံးပေးပြီးလျစ်လျူရှုပါလိမ့်မည်။
Aurora Nieto အားစာပြန်ပါ
Dorian Maple ဟုသူကပြောသည်
Dorian Arce သို့ပြန်သွားပါ
ကျွန်ုပ်တို့တွင်ဖန်ဆင်းရှင်၏တက်ကြွသောစွမ်းအားရှိကြောင်းသိရုံဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့ကို ပို၍ ကျေးဇူးတင်လေးမြတ်စိတ်နှင့်မိမိကိုယ်ကိုနှင့်အခြားသူများအပေါ်ချစ်ခင်ကြင်နာမှုပိုရှိစေသည်။
Zully Diaz ဟုသူကပြောသည်
"အစေခံရန်မအသက်ရှင်သောသူ, အသက်ရှင်ရန်အစေခံမထားဘူး။ " ကတ္တား၏မိခင်ထရေဇာ
deivins farias ဟုသူကပြောသည်
deivins farias အားပြန်ကြားပါ
Norma Alejandra Sierra Garcia ဟုသူကပြောသည်
norma alejandra sierra garcia သို့ပြန်သွားပါ
ငါမအောင်မြင်ပါ၊ ကျွန်ုပ်အလုပ်မလုပ်သောနည်းလမ်းများကိုရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့သည်။ ( ငါသိတယ်)
ငါအောင်မြင်မှုရဲ့သော့ကိုမသိဘူး၊ သို့သော်ပျက်ကွက်မှု၏သော့ချက်ဖြစ်သည်။ လူတိုင်းစိတ်ကျေနပ်အောင်ကြိုးစားပါ (yose)
Luis Gonzalez ဟုသူကပြောသည်
သင့်ဘဝတိုးတက်အောင်လုပ်ရန်အလေ့အကျင့် ၈ ခု [၃၁ ရက်စိန်ခေါ်မှု]